Izixhobo ze-Android-iifowuni, iitafile, iwatchwatch kunye nokunye! | I-Androidsis (iphepha 24)
Uvavanyo lokunyamezela kwe-Oukitel WP5000
Sikunika ividiyo apho i-Oukitel WP5000 iphantsi kovavanyo olwahlukeneyo lwe-14 kwaye apho ibonisa ubunzima bayo, kunye nokumelana nezothuso namanzi.
Izipho eziphezulu ezingabizi kakhulu ukunika uTata
Ukukhethwa kwezimvo zesipho esifanelekileyo ngoSuku lukaTata ngezi ziphezulu zingabizi kwaye zifuna ukunika uTata.
I-headphone jack ewe, i-headphone jack akukho ye-OnePlus
Ukungabikho kwe-headphone jack kubonakala ngathi kuhlala kuyingxaki kubasebenzisi abaninzi, ubuncinci yile nto kuvavanyo lwamva nje lwe-CEO ye-OnePlus.
Iifowuni ezili-10 ezinamandla zikaFebruwari 2018, ngokwe-AnTuTu Benchmark
I-AnTuTu isizisela uluhlu lwezona zixhobo zinamandla kwintengiso yenyanga ngenyanga, apho, kwesi sihlandlo, sinokubona ukungabikho kweGoogle Pixel 2, i-Samsung Galaxy S8, kunye nezinye izixhobo esicinga ukuba ziya kuvela olu luhlu kodwa khange kube njalo. Siyakwandisa!
Ukucoca amaxabiso eXiaomi Redmi Qaphela 5 Pro yeYurophu
Kutyhilwe amaxabiso asolwayo eXiaomi Redmi Qaphela 5 Pro eYurophu. Fumanisa ngakumbi malunga namaxabiso ezakuba nefowuni yohlobo lwesiTshayina xa isungula eYurophu.
Sinikela kuwe iHuawei Nova 2 Lite, ibanga elitsha eliphakathi kunye nokuqwalaselwa kobuso
IHuawei isandula ukwazisa iNova 2, ifowuni eneenkcukacha kunye neempawu ezifanelekileyo kwisigaba esiphakathi se-Android. Esi sixhobo satyhilwa kwiiPhilippines, indawo ekhethwe yinkampani yaseAsia ethe yamkelwa kangako kwimarike ixesha elide. Sinikela kuwe!
Ifowuni ebalulekileyo iqala ukufumana i-Android Oreo 8.1
Ifowuni ebalulekileyo ibisanda kuqala ukufumana uhlaziyo lwe-Android 8.1 yazo zonke iiterminal, ngaloo ndlela tsiba uhlaziyo lwe-Android 8.0
I-Fitbit Versa: I-smartwatch ebiza ixabiso eliphantsi
I-Fitbit Versa: Ukucaciswa kweswatchwatch entsha enexabiso eliphantsi. Fumana ngakumbi malunga newotshi entsha yewotshi eza ngexabiso eliphantsi kuneemodeli ezininzi kwintengiso.
Ukuvuza kuyilo kunye nedatha entsha malunga ne-LG G7
I-LG G7: Ukuvuza kuyilo kunye nokucaciswa kwalo. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni ephezulu yokuthengisa ekulindeleke ukuba ifike kwintengiso kungekudala.
Isamsung ishiya umbono wokusebenzisa inzwa yeminwe phantsi kwesikrini
Yonke into ibonakala ibonisa ukuba inkampani yaseKorea i-Samsung ayicwangcisi ukusebenzisa inzwa yeminwe phantsi kwescreen, iyilahla ngokupheleleyo le teknoloji, njengeApple.
INokia 9 inokubandakanya inotshi kunye neminwe yeminwe phantsi kwesikrini
INokia 9 inokuba nenotshi kunye neminwe yeminwe kwiscreen. Fumanisa ngakumbi malunga neempawu ezimbini ekulindeleke ukuba zibandakanye nefowuni ephezulu.
Imifanekiso ecociweyo yeemodeli zeHuawei P20 kunye nemibala
IHuawei P20, iP20 Pro kunye neP20 Lite: Yazi uyilo lwabo. Funda ngakumbi ngoyilo kunye nemibala apho iifowuni ezintsha zeHuawei ziya kuthi zifike kwintengiso.
I-Samsung Galaxy S9 nayo iya kuba nohlobo lweMicrosoft Edition
Inkampani yaseKorea i-Samsung kunye neMicrosoft baphinde bafikelela kwisivumelwano sokunikezela ngeGalaxy S9 kunye neGalaxy S9 + kwiVenkile kaMicrosoft kuhlelo olukhethekileyo lweMicrosoft Edition, apho sifumana khona usetyenziso oluphambili lweMicrosoft.
Dibana ne-Honor 7C, uluhlu oluphakathi lweHuawei
I-Huawei isandula ukwazisa i-Honor 7C, ibanga eliphakathi eliza lixhotyiswe nge-5.99-intshi HD + isikrini kwifomathi ye-18: 9, i-Qualcomm Snapdragon 450 SoC, kunye neenguqulelo ezimbini: I-3GB ye-RAM ene-32GB yeROM, kunye nenye i-4 / 64GB. Yazi zonke iinkcukacha zayo!
I-Android Wear itshintsha igama layo kwaye ibe yi-Wear OS
I-Wear OS: I-Android Wear ibizwa ngokutsha. Fumana okuninzi malunga negama elitsha lenkqubo ye-smartwatch eqala ukufikelela kubasebenzisi,
IXiaomi Mi 7 nayo iza kuza nenotshi ngokwe firmware yayo
IXiaomi Mi 7 iza nenotshi kwiscreen sayo njengeMi Mix 2S, kwaye oku kungenxa yeekhowudi zeefayile ezininzi ezibonisa ukuba esi sixhobo siza kuza nenotshi kunye nokwaziwa kobuso be-3D, ukongeza ekuqinisekiseni ezinye ezininzi Ukubalula. Siyakwandisa!
I-Huawei Y9 2018: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha ekumgangatho ophakathi ukusuka kuhlobo lwesiTshayina. Inikwe ngokusemthethweni kwaye yaziswa naseThailand.
I-Galaxy S9 + ifumana i-4 ngaphandle kwe-10 kubafana kwi-iFixit
Isamsung ayikaze ibonakaliswe ngokunikezela ngokulula kokulungiswa kweetheminali zayo kunye neGPS S9 + siyabona ukuba iyaqhubeka nokuseta imeko efanayo.
Umncedisi kaGoogle uza kwiitafile ezine-Android 5.0 Lollipop
Umncedisi kaGoogle uza kwiitafile ezine-Android 5.0 Lollipop. Fumanisa ngakumbi malunga nokufika komncedisi wenkampani kumacwecwe asebenzisa olu hlobo lwenkqubo yokusebenza
IHuawei P20 yamaphephadonga ahluziwe ngaphambi kwengcaciso
Kwiiveki ezintathu ngaphambi kokunikezelwa ngokusesikweni kweHuawei P20 kunye nokwahluka kwayo okwahlukileyo, i-leaker esemthethweni yehlabathi le-Android, u-Ewan Blass usandula ukucoca amaphephadonga kwisisombululo sabo sokuqala.
IMotorola iqinisekisa ukuba kuya kubakho iimodeli ezintsha kuluhlu lweMoto Z
IMotorola izakwazisa iimodeli ezintsha kuluhlu lweMoto Z. Emva kweentsuku ezimbalwa zokuhleba, uphawu luyaqinisekisa ukuba kuya kubakho iifowuni ezintsha ngaphakathi kuluhlu.
Isamsung ikhupha uhlaziyo lokuqala loKhuseleko lweGPS S9 kunye ne-S9 +
Xa zombini i-Galaxy S9 kunye neGPS S9 + bezisentengisweni kuphela iintsuku ezimbalwa, inkampani yaseKorea isandula ukukhupha uhlaziyo lokuqala lokhuseleko lwenyanga kaMatshi.
IHuawei P20 iya kuba nohlobo loyilo lwePorsche
Uyilo lweHuawei P20 Porsche: Inguqulelo entsha ekhethekileyo yefowuni. Fumana ngakumbi malunga nale fowuni yohlelo olunomda elixabiso liza kudlula lelo le-S9 okanye i-iPhone X kwintengiso.
Ezi zizibhengezo zokuqala zeTV zeGalaxy S9 kunye ne-S9 +
Inkampani yaseKorea i-Samsung isandula ukupapasha intengiso yokuqala kumabonwakude waseKorea ebonisa ukusebenza kweempawu eziphambili zeflegi entsha yenkampani yaseKorea.
Uvavanyo lweXiaomi Mi6
Uphengululo olupheleleyo lweXiaomi Mi6. Uvandlakanyo olucokisekileyo lwevidiyo engaphezulu kwemizuzu engama-49 yemifanekiso apho ndikuxelela yonke into ekufuneka uyazi ukuze uthathe isigqibo malunga nokuthengwa kwesinye sezitishi ezinemvelaphi yaseTshayina.
Uhlaziyo loKhuseleko lweGalaxy A8 ngoku luyafumaneka
Abafana bakwaSamsung basandula ukukhupha uhlaziyo lokhuseleko lwenyanga kaMatshi kwi-Samsung Galaxy A8 (2018)
Eyona ndlela isebenzayo ye-eBay SuperWeekend
I-eBay isilungiselele izibonelelo ezininzi kule SuperWeekend, kwaye, ngeli xesha, siza kuqwalasela ezona zixhobo zibhetele zokuba ufumane enye yazo kwaye usombulule impelaveki ngeyona nto ibalaseleyo i-eBay esinayo. Apha uya kufumana izaphulelo ezininzi ukuze ufumane enye yezi ndlela zokuhambisa kunye neetafile. Fumanisa!
I-Android Oreo inokwenzeka ukuba ikhuphe imihla yeGlass Note 8, iGPS S7, kunye neGPS S7 Edge
Ngokweendaba zamva nje ezivela eTurkey ezinxulumene neGalaxy Note 8 kunye ne-S7, ingxelo yokugqibela ye-Android Oreo iza kufika kungekudala.
I-Nexus ayizukufumana u-Android P. Fumanisa ngakumbi malunga nesigqibo senkampani sokunganiki iifowuni uhlaziyo lwe-Android P. Inkampani yaseMelika izimisele ukugxila kwiiPixels.
UXiaomi uza kuvula ivenkile yakhe entsha eMadrid ngo-Matshi 17. Fumana ngakumbi malunga nokuvulwa kwevenkile yesithathu yohlobo lwaseTshayina eMadrid oluza kubanjwa kwiveki ezayo. Uphawu lwaseTshayina luzinikele ngamandla kwintengiso yaseSpain
IXiaomi Mi Mix 2S iya kuba nenotshi kwikona ephezulu ngasekunene ngokwe vidiyo
IXiaomi Mi Mix 2S iza kuza nenotshi ephezulu ngasekunene ngokokuvuza okutsha. Oku kuqinisekiswe kutshanje kwividiyo apho sibona umsebenzisi eyisebenzisa. Ukongeza, sinokuxabisa kunye nokusebenza kwayo. Fumanisa!
I-OnePlus 6 iyazigqwesa izitha zayo kwiibhentshi
Iziphumo zebenchmark ye-OnePlus 6 zigqithile kwizimbangi zayo. Fumana ngakumbi ngamanqaku afunyenwe yifowuni kwezi mvavanyo.
IHuawei iya kusebenzisa ubukrelekrele bokufakelwa kuluhlu olukumgangatho ophakathi
IHuawei izisa ubukrelekrele bokufakelwa kuluhlu oluphakathi olusezantsi. Fumana ngakumbi malunga nezicwangciso zenkampani kunye nendlela abafuna ukuyisebenzisa ngayo.
AbakwaNokia bajoyina inkqubo eCetyiswayo yeShishini le-Android
INokia iba yinxalenye yokuCetyiswa kweShishini le-Android. Fumana ngakumbi malunga nokungena kwebrendi kwiprojekthi yesatifikethi seshishini kwiifowuni.
UXiaomi uqinisekisa ukumiliselwa kweXiaomi Mi MIX 2S kaMatshi 27
IXiaomi Mi MIX 2S iya kuziswa ngokusesikweni ngoMatshi 27. Fumanisa ngakumbi malunga nokumiliselwa kunye nokunikezelwa kwefowuni entsha yohlobo lwesiTshayina
IVivo Apex, inokufikelela kwintengiso kwikota yesithathu yonyaka
Amarhe amva nje acacisa ukuba i-Vivo Apex iyakuba yinto yokwenyani kwaye ayisayi kuba yingcinga eyanikezelwa kwi-MWC edlulileyo
Khuphela kuphela i-Xperia XZ2 yamaphephadonga
Kule nqaku sikubonisa imifanekiso yamaphephadonga e-Sony Xperia XZ2, kwisisombululo sabo sokuqala
IHuawei P20 Lite ifika kwi-TENAA kwaye isinike iinkcukacha ezithe kratya
IHuawei P20 Lite iye yavuza kumlawuli kunye nokuqinisekisa i-TENAA kutsha nje kutyhila amanqaku kunye neenkcazo ezazifakwe ngaphambili. Sikunika iinkcukacha!
I-Nomu M6, iselfowuni enganyangekiyo nesimbo esingenakuthelekiswa nanto kunye noyilo
Dibana neNomu M6, i-smartphone enganyangekiyo enezixhobo ezininzi eziza kusivumela ukuba siqhubeke nokuzola yonke imihla ngaphandle kokuncama zonke izinto ezifunekayo kwi-smartphone ukulungiselela inkqubo yethu yemihla ngemihla.
Imifanekiso yokukhuthaza uthotho lweHuawei P20 ityhila ikhamera engasemva kathathu kunye nokusikwa ngaphambili
Imifanekiso entsha yokwazisa yothotho lweHuawei P20 ibonisa ulungelelwaniso lweekhamera ezintathu zangasemva.
I-Alcatel 3C ngoku iyafumaneka eSpain
Iselfowuni 3C: Uluhlu olutsha lokungena olukhoyo eSpain. Fumana ngakumbi malunga nefowuni entsha ye-Alcatel ekhoyo ngoku kwilizwe lethu.
I-HOMTOM HT70: Iselfowuni esincinci kunye nebhetri ye-10.000 mAh kwintengiso
I-HOMTOM HT70: 10.000 mAh ibhetri kweyona fowuni icekeceke. Fumana ngakumbi malunga nefowuni entsha kraca eza kuphehlelelwa ngo-Epreli.
Umhla wentetho kaMeizu E3 uqinisekisiwe
Meizu E3: Ukucaciswa kunye nomhla wentetho. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha evela kuhlobo lwesiTshayina oluya kuphehlelelwa kamva kule nyanga.
I-Honor 7C iya kuziswa ngalo Matshi 12 uzayo
IHuawei Honor 7C iya kuziswa ngalo Matshi 12 yinkampani yaseTshayina. Oku kwazisiwe ngombulelo kukuvuza kwangoku apho sinokubona ubungakanani bescreen kunye nomhla wentetho esingakudeyo kuwo, kodwa ziintsuku ezintlanu nje kuphela. Fumanisa!
I-Energizer Hardcase H570S, iselfowuni eyomeleleyo ene-18: 9 screen kunye nebhetri ye-4800mAh
Inkampani yaseMelika i-Energizer, iveza i-Energizer Hardcase H570S, eyokuqala eyi-smartphone eyomeleleyo ene-18-intshi ye-FullHD + 9: 5.7 isikrini kunye nomthamo omkhulu webhetri we-4.800mAh. Esi siginali siza sixhotyiswe ngesiqinisekiso se-IP68, iMediatek MT6739 i-quad-core SoC, i-3GB ye-RAM, nokunye.
Isamsung ithenga ukuqala kwe-AI ukuphucula iBixby
Inkampani yaseKorea iqinisekisile ngokusesikweni ukuba ithenge ukuphela konyaka ophelileyo inkampani uKngine, isiqalo seArtificial Intelligence yokuphucula iBixby
IHuawei ikwafuna ukuba nomncedisi wayo
NgokukaBloomberg, inkampani yezonxibelelwano uHuawei isebenza kumncedisi wayo, umncedisi oza kuyazisa kuphela kumhlaba waseTshayina.
Esinye isicelo esimangalisayo sokuvelisa kwe-Smartphone okanye iThebhulethi yethu
Kuba uthanda izicelo zale ndlela, namhlanje ndikuzisela esinye isicelo esingakholelekiyo kwimveliso yesiphelo sethu se-Android, nokuba yile Smartphone okanye iThebhulethi.
I-LG X4: Uluhlu lwenqanaba elitsha lokungena
I-LG X4: Ukucaciswa kwenqanaba elitsha lokungena kwenqanaba. Fumana ngakumbi malunga nefowuni entsha kraca esele iphehlelelwe eMzantsi Korea.
Iindidi ezahlukeneyo ze-Oppo R15 kunye ne-R15 ye-Mirror yoHlelo lweMirror zichaziweyo zibulela i-TENAA
Ukucaciswa kunye neempawu ze-Oppo R15 kunye ne-Oppo R15 ye-Mirror Edition, amalungu amabini akudidi oluphezulu olusandula ukuvuza, kutshanje iinkcukacha kunye neempawu ziye zavuza umbulelo kwi-TENAA. Sandisa iindaba kuwe!
Ityhile imigaqo ye-Moto E5 entsha
IMoto E5: Ukucaciswa kwenkqubo entsha ye-Motorola. Fumana ngakumbi malunga noluhlu oluphakathi lwegama elitsha kraca ngeefowuni ezintathu.
I-OUKITEL WP5000, i-smartphone erhabaxa enebhetri ye-5.000 mAh, ukumelana ne-IP68 kunye ne-18: 9 screen
Isiphelo esitsha se-OUKITEL esijolise kubasebenzisi abafuna kakhulu yi-WP5000, imodeli enganyangekiyo kuphela kukothuka, amanzi kunye nothuli ngaphandle kokuqhwanyaza, kodwa ikwasinika ibhetri ye-5.000 mAh kunye ne-18: 9 screen
I-HTC Cinga ii-specs zityhilwe
Ukucaciswa okuvuzayo kweHTCT entsha. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha kraca eya kuphehlelelwa ngo-Epreli.
UXiaomi Mi 6 kunye noXiaomi Mi MIX 2 kungekudala bazokwamkelwa ebusweni
Ukuqwalaselwa kobuso kuza kwiXiaomi Mi 6 kunye neXiaomi Mi MIX 2. Fumanisa ngakumbi malunga nomsebenzi omtsha oza kwiifowuni ezimbini zohlobo lwesiTshayina.
Kubalulekile ukubhaliswa ngo-2017 ikhamera yokungena ephuma phezulu kwifowuni, njengeVivo APEX
Ikhamera ebuyisekayo kwiVivo APEX ibhaliswe yi-Essential, inkampani kaAndy Rubin kunyaka ophelileyo kwaye ibinokuyenza kwifowuni ebalulekileyo.
Isamsung iyeke ukukhupha uhlaziyo lokhuseleko kwezinye iiterminal zika-2016
Inkampani yaseKorea i-Samsung ibhengeze ii-terminals eziza kuyeka ukufumana uhlaziyo lokhuseleko kwaye ziya kujoyina inkqubo yohlaziyo lokhuseleko lwarhoqo ngenyanga kunye nekota.
UXiaomi uzokwazisa i-smartphone nge-Android Go kule nyanga
Ifowuni yokuqala yeXiaomi ene-Android Go iza kufika ngoMatshi. Fumanisa ngakumbi malunga nezicwangciso zenkampani zokuphehlelela ifowuni yayo yokuqala ngale nguqulo yenkqubo yokusebenza.
Umhla wokukhutshwa kweHTC U12, amaxabiso kunye nezinto ezichaziweyo
Sikuxelela zonke iinkcukacha ezivuzayo zeHTC U12
I-Meizu M6S ene-4 kunye ne-6GB ye-RAM ifumene isatifikethi ngu-TENAA
Inkampani yaseTshayina iMeizu iqinisekisile iMeizu M6S nge-4 kunye ne-6GB yememori ye-RAM kwi-TENAA. Oku kwenzeke kutshanje, kwaye, ke ngoko, siza kubabona kwikhathalogu yomenzi kungekudala, kodwa ngeempawu ezifanayo kunye nokubalulwa kwe-6GB ye-RAM M3S esungulwe ngoJanuwari walo nyaka.
Ukuvela kwoluhlu lukaSony Xperia kwividiyo
Ngokusungulwa koyilo olutsha, uSony upapashe ividiyo entsha apho sinokubona khona ukuvela kweXperia ukusukela oko yafika kwimarike.
Ukucaciswa kwesityholo se-HTC Desire 12 Plus, okwahlukileyo kokudala kwe-Desire 12, kuza kukhanya
Kwiiyure nje ezimbalwa ezidlulileyo, iinkcukacha kunye neempawu zeHTC Desire 12 Plus ziye zavela, umahluko onamandla ngakumbi kwi-Desire 12 eya kuthi ifike ngescreen se-intshi ye-5.99, i-SD450, i-3GB ye-RAM, nokunye okuninzi. Siyakwandisa!
Ukongeza kwiscreen, i-Galaxy S9 Plus ikwanekhamera ebalaseleyo
Njengoko kulindelwe, i-Galaxy S9 Plus kunye nekhamera yayo emibini iyeyona ibalaseleyo kwintengiso ekhoyo ngoku kuyo nayiphi na i-smartphone.
Ngokuka-DisplayMate, isikrini seGPS S9 sesona sibalaseleyo kwintengiso
Ngokwenkampani yeDisplayMate, ophetheyo ukuhlalutya zonke izikrini, nokuba zezaluphi na uhlobo, ezifikelela kwimarike, i-Galaxy S9 yeyona ilungileyo kwintengiso namhlanje, idlula leyo ye-iPhone X, kude kube ngoku yayiyeyona nto ibalaseleyo. .
Amalungelo awodwa omenzi wechiza eSamsung uyilo lwee-smartphones ezintathu ezizayo
I-Samsung patent ezintathu zoyilo lwe-smartphone lwekamva. Fumanisa ngakumbi malunga nelungelo elilodwa lomenzi wohlobo lwaseKorea olutsalile umdla omkhulu.
Ukucocwa kweenkcukacha, ixabiso kunye noyilo lweHuawei P20 Lite
I-Huawei P20 Lite: Ukucaciswa, amaxabiso kunye noyilo luvuza. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha evela kuhlobo lwesiTshayina oluya kuboniswa kamva kule nyanga.
Uhlaziyo lukaFebruwari kwezokhuseleko lweGPS S8 kunye ne-S8 + ngoku iyafumaneka
Uhlaziyo lokhuseleko lwenyanga kaFebruwari yeGalaxy S8 kunye ne-S8 + ngoku iyafumaneka ukuze ikhutshelwe kwiitheminali ezifanelekileyo.
I-OnePlus ijoyina inotshi yefashoni kunye nesiphelo sayo esilandelayo, i-OnePlus 6
Umvelisi wokugqibela obonakala ekopa inotshi ye-iPhone X yi-OnePlus ngokwemifanekiso yokuqala eye yavuza imodeli yayo elandelayo.
IXiaomi Mi Mix 2S kunye neMi 7 banesikrini se-OLED esingu-6.01-intshi esivela kwi-Samsung
I-Xiaomi Mi Mix 2S kunye neMi 7, ngokwamarhe amva nje abesenzeka, iza kuza ne-6.01-intshi ye-Samsung OLED yesikrini. Oku kukhutshwe kutshanje, kodwa akuqinisekiswanga yinkampani yaseTshayina. Siyakwandisa!
I-ASUS Zenfone Max M1: I-ASUS entsha enebhetri enkulu ityhilwe kwi-MWC
I-ASUS Zenfone Max M1: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa. Fumana ngakumbi malunga nefowuni entsha ye-ASUS ityhilwe kwi-MWC 2018.
Ii-smartphones ezirhabaxa akufuneki ukuba zimbi kwaye i-NOMU iyangqina nge-M6
Isiphelo esitsha senkampani NOMU ukumelana nezothuso kunye namanzi yi-NOMU 6, isiphelo sendlela esishiya ecaleni ubuhle bemveli bolu hlobo lwesixhobo.
Inguqulelo yehlabathi jikelele yeXiaomi Mi 6 iqala ukuhlaziya kwi-Android 8.0 Oreo
I-Android 8.0 Oreo ifikelela kuguqulelo lwehlabathi lweXiaomi Mi 6. Fumana ngakumbi malunga nokuhlaziywa kwefowuni ephezulu yohlobo lwesiTshayina.
Ubomi bebhetri ye-Galaxy S8 kunye ne-S8 + ifana kakhulu naleyo ye-Galaxy S9 kunye ne-S9 +
Amanani okusetyenziswa kwebhetri asemthethweni anikezelwa yi-Galaxy S9 entsha kunye neGPS S9 ngokufanayo sinokuyifumana ngaphambili, ngaphandle kokusetyenziswa kwebhetri xa kudlala umculo.
Uphononongo lwe-UHANS i8
Uhlalutyo lwe-UHANS i8, i-screen yekrini yonke ene-intshi ezi-5,7, i-4GB yememori ye-RAM, kunye nekhamera emibini yeSony engayi kukushiya ungakhathali. Sivavanye ngokucokisekileyo ukuze sibone ubuhle nobubi bayo. Ixabiso?
Isamsung ingasusa uthotho lwe-S olandela i-Galaxy S9
Ngodliwanondlebe no-DJ Koh, igama lomntu oza kungena ezihlangwini kwi-Galaxy S9 inokuba yeyokugqibela kuthotho lwe-Samsung S.
I-DOOGEE V: Iflegi entsha kraca eboniswe kwi-MWC 2018
I-DOOGEE V: Inkcazo ephezulu kwi-MWC 2018. Fumana ngakumbi malunga nokunikezelwa kwefowuni yohlobo lwentengiso kumsitho odumileyo.
I-ASUS Zenfone 5Z, iZenfone 5 kunye ne-5 Lite: Iifowuni ze-ASUS zivezwe kwi-MWC 2018
I-ASUS Zenfone 5Z, iZenfone 5 kunye ne-5 Lite: Ukucaciswa kwexabiso lokwazisa. Fumanisa ngakumbi malunga neefowuni ezibonisiweyo zohlobo lweMWC 2018.
Fumana iifowuni ze-Android Go eziboniswe kwi-MWC 2018
Iifowuni ze-Android Go zityhilwe kwi-MWC 2018. Fumana ngakumbi malunga neefowuni ezisebenzisa ukukhanya kwenkqubo yokusebenza eboniswe kumsitho odumileyo.
Dibana ne-Energizer Hardcase H590S, iselfowuni ene-5800mAh ibhetri
Inkampani yaseFrance iAvenir Telecom, ibhengeze i-Energizer Hardcase H590S, iselfowuni eneempawu kunye neenkcukacha zobuchwephesha ezifanelekileyo phakathi kwebanga kunye nebhetri engekho ngaphezulu nangaphantsi kwe-5.800mAh. Yazi!
Bhuka i-Samsung Galaxy S9 ngoku kwiAmazon kwaye ufumane isaphulelo ukuya kuthi ga kwi-376 euros. Sichaza indlela yokufumana
Gcina i-Samsung Galaxy S9 entsha okanye i-S9 Plus ngoku eAmazon kwaye uyithathe ngesaphulelo ukuya kuthi ga kwi-376 yexabiso kwixabiso layo elisemthethweni.
UWiko Tommy 3, uLenny 5 noJerry 3: Isiphelo esisezantsi sophawu nge-Android Go
UWiko Tommy 3, uLenny 5 noJerry 3: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa. Fumanisa ngakumbi malunga neefowuni ezintathu ezisezantsi ezivela kuhlobo lwaseFrance.
I-LG iveza i-K10 kunye ne-K10 Plus, iiterminal ezimbini ezisezantsi
Inkampani yaseKorea i-LG izise iiterminal ezimbini ezitsha kwi-MWC yokuphela kwentengiso: i-LG K10 kunye ne-LG K10 Plus
Isamsung iqinisekisa inkxaso yeTrble kwiGPS S9 kunye neS9 +
I-Samsung Galaxy S9 kunye ne-S9 + zinenkxaso yeTrble. Fumana okunye malunga nokuqinisekiswa yinkampani ukuxhasa le projekthi.
I-Sony Ear Duo, zii-headphone ezintsha ezingenazingcingo zenkampani yaseJapan
AbakwaSony bazise kwi-MWC ukuzibophelela kwabo okutsha kwii-headphone ezingenantambo, i-Sony Ear Duo, ii-headphone ezisivumela ukuba sifikelele kumncedisi wesiphelo sethu, nokuba nguSiri okanye uMncedisi kaGoogle.
I-Hoox K31: Iselfowuni ekhuselekileyo yeenkampani ezichazwe kwi-MWC
I-Hoox K31: Eyona mfono ikhuselekileyo kwiinkampani eziboniswe kwi-MWC. Fumana okunye malunga nale fowuni ikhuselekileyo esele ihanjisiwe kumnyhadala odumileyo.
Dibana ne-Sony Xperia XZ2 kunye ne-XZ2 Compact
Fumana umphezulu omtsha woluhlu oluthiwe thaca ngu-Sony kwi-MWC, i-Sony Xperia XZ2 kunye nohlobo olunamandla ngokulinganayo kodwa oluncinci, i-Sony Xperia XZ2 Compact
I-Leagoo izisa kwi-MWC iLeagoo S9, iklone yokuqala ye-iPhone X kunye neLeagoo Power 5 ene-7.000 mAh ibhetri
ILeagoo, enye yeefemu zaseAsia ebezime kwezona nyanga zidlulileyo, ibikhona kwi-MWC apho ithe yanikezela ngeetheminali zayo ezimbini: iLeagoo S8 kunye neLeagoo Power 5
Ngaba ujonge ifowuni nge-Android One? Ezi zezo zinikezelwe kwi-MWC 2018
Ezi ziifowuni ze-Android One ezithiwe thaca kwi-MWC 2018. Funda nzulu malunga neefowuni eziye zathiwa thaca kumsitho ngolu hlobo lwenkqubo yokusebenza.
Ukusuka kwi-MWC18 sikubonisa ukuba zisebenza njani i-Art Emojis entsha ye-Samsung Galaxy S9 kunye ne-S9 Plus
Ividiyo erekhodwe kwi-MWC18 endikubonisa ngayo indlela i-emojis entsha yobugcisa ye-Samsung Galaxy S9 kunye ne-Samsung Galaxy S9 Plus esebenza ngayo
I-VOYO I8 Max: Ithebhulethi epheleleyo ye-10-intshi kwisaphulelo eBanggood
IBangood: VOYO I8 Max ithebhulethi ye-Android ngesaphulelo. Fumanisa okungakumbi malunga nale cwecwe lophawu lwesiTshayina onokuthi uluthathe ngoku ngesaphulelo kwivenkile edumileyo.
I-LG V30S ThinQ, i-V30 ehlaziyiweyo eneyona nto ibalaseleyo ye-AI eboniswe kwiNkomfa yeHlabathi yeFowuni
Esinye sezimanga ezingalindelekanga ezithe zenzeka ngenxa yeNkomfa yeHlabathi yeFowuni eqhubeka ukusukela nge-25 kaFebruwari kwisixeko saseBarcelona, ​​eSpain, ibe ngumboniso we-LG V30S ThinQ, i-V30 ehlaziyiweyo yeyona ilungileyo yobukrelekrele bokufakelwa kunye nophuculo oluninzi esiza kuthi silunike iinkcukacha
I-Ulefone T2 Pro kunye ne-Ulefone X: Uluhlu oluphakathi lwe-Ulefone
I-UleFone T2 Pro kunye ne-Ulefone X: Iinkcukacha, amaxabiso kunye nokuqaliswa. Fumanisa ngakumbi malunga neefowuni ezintsha ezithiwe thaca uphawu lwaseTshayina kwi-MWC 2018.
Esi sisibhengezo sokuqala esisemthethweni seGPS S9
Isamsung sele ithumele kwisitishi sayo seYouTube ividiyo yokuqala yentsingiselo yeGlass S9 yayo, isiphelo sendlela esihlasela imarike ukuba itshayele zonke ii-smartphones ngekhamera, enkosi kwi-shutter eguqukayo ehlanganisiweyo.
I-Samsung Renove: inkqubo yesaphulelo kwi-Galaxy S9
I-Samsung Renove: inkqubo yesaphulelo kwi-Galaxy S9. Fumana ngakumbi malunga nale nkqubo yesaphulelo eqhubeka de kube ngoMatshi 25.
I-Galaxy S9 kunye ne-S9 + ixhasa amakhadi e-MicroSD ukuya kuthi ga kwi-400GB
Indawo yokugcina ephezulu efumanekayo ngamakhadi e-MicroSD kwi-Galaxy S9 yi-400 GB, ngaphezulu kwesithuba esaneleyo sokugubungela nasiphi na isidingo.
Ifoto entsha yeHuawei P20 evuzayo kwaye siyilo olukhulu
I-ZTE Temp Go: Ukucaciswa kwe-smartphone entsha ene-Android Go
I-ZTE Temp Go: Iinkcukacha, amaxabiso kunye nokuqaliswa. Fumana ngakumbi malunga nefowuni entsha kraca eza kusebenza ne-Android Go.
I-ZTE Blade V9 sele isemthethweni, yazi iinkcukacha zayo ngokupheleleyo
I-ZTE Blade V9: Iinkcukacha, amaxabiso kunye nokuqaliswa. Fumanisa okungakumbi malunga noluhlu oluphakathi oluphakathi lophawu olubhejayo kuyilo olukhulu, lwangoku kakhulu kunye nekhamera ephindwe kabini.
Fumana ii-smartphones ezintlanu zakwaNokia eziboniswe kwi-MWC 2018
INokia: I-smarthpones eboniswe kwi-MWC 2018. Fumanisa ngakumbi ngeefowuni eziboniswe luphawu kumsitho obuse-Barcelona namhlanje.
I-Samsung Galaxy S9 ngoku isemthethweni, zonke iinkcukacha kunye neempawu zeflegi entsha yeSamsung
Emva phantse konyaka kukho amarhe, ekugqibeleni sikhuphe ukungathandabuzeki kwaye sele sazi ukuba zonke iimpawu kunye nokubalulwa kweflegi entsha yeSamsung: iGPS S9
I-Huawei MateBook X Pro: Ilaptop enesikrini esingafakwanga
I-Huawei MateBook X Pro: Ilaptop yokuqala enesikrini esingafakwanga. Fumanisa ngakumbi malunga neLaptop yohlobo lophawu lwaseTshayina eboniswe kwi-MWC 2018.
I-Huawei MediaPad M5: Isizukulwana sesine samacwecwe e-Huawei
I-Huawei MediaPad M5: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokuqaliswa kwe-MWC 2018. Funda ngakumbi ngethebhulethi entsha yohlobo lwesiTshayina eboniswe kwi-MWC 2018.
IMicrosoft kunye neXiaomi bajoyina imikhosi yokudala ilifu kunye nobuchwephesha bobuchwephesha kunye neeprojekthi
IMicrosoft kunye neXiaomi basebenza kubukrelekrele bokufakelwa kunye nezixhobo zefu kunye neeprojekthi. Fumana ngakumbi malunga nesivumelwano ezi nkampani zombini zisandula ukufikelela.
Iselfowuni iveza uthotho lwayo olutsha 1, 3 kunye no-5 kwi-MWC 2018
I-Alcatel iveza uthotho lwayo olutsha lwe-1, 3 kunye ne-5 kwi-MWC 2018. Fumanisa ngakumbi malunga noluhlu olutsha lwegama esele linikezelwe ngokusemthethweni.
Iselfowuni 1X: Ukucaciswa kwefowuni entsha nge-Android Go
Iselfowuni 1X: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa. Fumanisa ngakumbi malunga nokuqaliswa kwefowuni entsha yesiphelo esisezantsi esiza ne-Android Go.
I-BQ ithengise i-1,1 yezigidi ze-smartphones kunyaka ophelileyo
I-BQ ithengise i-1,1 yezigidi ze-smartphones kunyaka ophelileyo. Fumana ngakumbi malunga nedatha yokuthengisa yenkampani yaseSpain kunyaka ophelileyo.
Ividiyo yokuqala ye-Samsung Galaxy S9 kunye ne-S9 + ivuza ngempazamo
Apha sikushiya ividiyo yokuqala ye-Samsung Galaxy S9 kunye ne-S9 + evuziswe ngempazamo kwiwebhusayithi esemthethweni ye-Samsung. Ividiyo engasasebenziyo kwisitishi sayo esisemthethweni kodwa kwi-Androidsis sinayo.
Ukucaciswa okwahlukeneyo kweMoto G6 kuvuza ngenxa yeGeekBench
IGeekBench ityhila iinkcukacha ezininzi zeMoto G6, indawo elandelayo esembindini wenkampani yaseMelika apho sifumana khona i-Android 8.0 Oreo njengenkqubo yokusebenza kunye nezinye. Ufuna ukwazi okungakumbi? Sikuxelela iinkcukacha!
Iilensi zikaGoogle ngoku ziyahambelana nezinye izixhobo
Iqonga lokwenyani likaGoogle liphume kwi-beta kwaye kungekudala liza kuhambelana nenani elikhulu leetheminali.
U-Evan Blass usinika iinkcukacha ezintsha malunga ne-Xperia XZ2 kunye ne-XZ2 Compact
Zishiyekelwe nje iintsuku ezimbalwa kwiNkomfa yeHlabathi yeBhola ekwiBarcelona, ​​yenye yezona zinto zibalulekileyo nezibalulekileyo kwezobuchwephesha emhlabeni, kwaye u-Evan Blass, isihluzi esidumileyo, uneenkcukacha ezininzi ezintsha zeSony Xperia XZ2 kunye neXZ2 Compact , iitheminali ezimbini eziphezulu eziza kuboniswa kulo mboniso nguSony.
Ngoku unokufumana i-Sony Xperia XA2, i-XA2 Ultra kunye ne-L2 eSpain
I-Sony Xperia XA2, i-XA2 Ultra kunye ne-L2, sele ikhona ukuthengiswa eSpain. Ezimbini zokuqala kwiVenkile yakwaSony yee-euro ezingama-429 kunye nama-329 ngokwahlukeneyo, kunye ne-L2 yee-euro ezingama-229 ngeAmazon njengaphambi kokuthengiswa. Bafumane ngoku!
I-Huawei MediaPad M5 10 Pro: Ithebhulethi kaHuawei efika kwi-MWC 2018
I-Huawei MediaPad M5 10 Pro: Ithebhulethi yeHuawei ye-MWC 2018. Fumanisa ngakumbi ngale thebhulethi intsha yohlobo lwaseTshayina oluya kufika kwi-MWC 2018.
I-Energizer Power Max P16K Pro, iselfowuni ene-16000mAh ibhetri eya kuziswa kwi-MWC e-Barcelona.
Dibana ne-Energizer Power Max P16K Pro, iselfowuni apho umenzi engakhange azikhethele ukuzimela kwayo, yiyo loo nto, ngokwenkampani yombane, i-P16K ithembisa ukuya kuthi ga ngaphezulu kweveki ngokusetyenziswa kwayo asizukukhathazeka ngeplaki. Siyakwandisa!
Oku kukucaciswa kweHuawei FLA-AL10 kunye ne-FLA-AL00 ngokweTENAA
IHuawei, inkampani yaseAsia ese China, kubonakala ngathi ilibale malunga ne-16: iifomathi zescreen ze-9, kwaye ikunye neHuawei FLA-AL10 kunye ne-FLA-AL00, izixhobo ezibini ezichaziweyo kwi-TENAA, babheja kwiiphaneli 18: Umlinganiso we-9. Sikuxelela konke malunga nabo!
Oku kunokuba kuyilo lweXiaomi Mi A2
Ukucoca uyilo olunokwenzeka lweXiaomi Mi A2. Fumanisa ngakumbi malunga nokuvuza apho uyilo olutsha lwegama eliphakathi kuluhlu lwefowuni yohlobo lwaseTshayina.
I-LG K8 kunye ne-LG K10 2018: Uluhlu olusezantsi luhlaziywa ngamandla amakhulu
I-LG K8 kunye ne-LG K10 2018: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa. Fumana ngakumbi malunga neefowuni ezintsha ezisezantsi ezivela kuhlobo lwaseKorea.
Ikhamera yeNest Cam IQ ngoku iyahambelana noMncedisi kaGoogle
Ikhamera ye-Nest kaGoogle sele iqalile ukufumana uhlaziyo olwenza ukuba ihambelane noMncedisi kaGoogle ukuze sikwazi ukuyisebenzisa ngokungathi likhaya likaGoogle.
Hayi, ixabiso leGalaxy S9 aliyi kudlula kwi-euro ezili-1.000 XNUMX
Kwakhona u-Evan Blass ukhuphe amaxabiso apho iiflegi ezintsha ze-Samsung ziya kuthi zifike kwintengiso, i-Galaxy S9 kunye ne-Galaxy S9 +
Ngaba sele uyayazi inkcazo yeMeizu E3? I-TENAA iyasityhilela
Kwiintsuku nje ezimbalwa ezidlulileyo, iMeizu E3 ivele kwi-TENAA, umlawuli waseTshayina kunye nesiqinisekiso esivelise ezinye zeempawu kunye nokubalulwa kobuchwephesha kwesi sixhobo. Siyakubonisa!
I-Honor 9 Lite ihlaziywa ngokuvula ubuso
I-Honor 9 Lite ihlaziywa ngokuvula ubuso. Fumana ngakumbi malunga nenqaku elitsha eliza kwifowuni entsha yohlobo lwesiTshayina.
I-Honor ekucingelwa ukuba yi-7C ihluziwe ngenxa ye-TENAA kwaye oku kukucaciswa kwayo
I-Huawei Honor 7C ebonakalayo icociwe nje kunye neempawu zayo kunye nenkcazo yayo enkosi ku-TENAA, isiqinisekiso saseTshayina esiza kuthi sonke sithengise iifowuni elizweni. Sikuxelela iinkcukacha!
Ikati emnyama S61 ikhutshiwe. Yazi iimpawu zayo kunye neenkcukacha zobugcisa!
I-Caterpillar isandula ukukhupha i-smartphone yayo yamva nje, kwaye yi-Cat S61, eyindlalifa ye-S60 ekhutshwe kunyaka ophelileyo. Sikuxelela zonke iimpawu kunye neenkcukacha zobugcisa! Yazi!
Ifowuni ebalulekileyo inokufika eYurophu phakathi enyakeni
Yonke into ibonakala ibonisa ukuba ifowuni ebalulekileyo inokufika eYurophu phakathi kulo nyaka, kungekudala ngaphambi kokuqaliswa kwesizukulwana sesibini sale modeli.
I-Huawei Yonwabela i-8 ifumana isatifikethi se-TENAA kwaye oku kukucaciswa kwayo
I-Mobile World Congress e-Barcelona isondela, kwaye iHuawei izakubakhona ngezixhobo ezitsha eziza kuphehlelelwa kulo msitho, kodwa, nangona kunjalo, inkampani yaseAsia igxile kwezinye iitheminali esiza kubona kamva, njengeHuawei Yonwabela i8. , iselfowuni esele sizazi iimpawu zayo.
Isamsung iqala ngokutsha ngo-Android Oreo kwiGPS S8
Kwiintsuku ze-8 emva kokuphinda uhlaziyo lwe-Galaxy S8 kwi-Android Oreo, inkampani yaseKorea ikhuphe ingxelo yokugqibela yokugqibela nengxaki yokuqalisa kwakhona.
Ezi iya kuba kukubalulwa kweHTC U12 Plus ngokokuvuza
I-HTC U12 Plus sisiphelo sendlela ephezulu esele sithethile ngayo malunga neempawu kunye neenkcukacha ezinokuthi zifike phakathi kulo nyaka. Ngokwokuvuza kwamva nje, kugqityiwe, kuyakufika nge-Snapdragon 845, 6 / 8GB ye-RAM, isikrini esizi-intshi ezi-6.1, kunye nezinye ezininzi.
I-Moto G6 Play ityhila iimpawu zayo kwibhentshi
Umdlalo we-Moto G6: Ukucaciswa okutsha kuvuza ibhentshi. Fumana ngakumbi malunga nefowuni entsha ye-Motorola ezayo kwiveki ezayo kwi-MWC 2018.
I-Sony Xperia ZX2 kunye ne-ZX2 Iimpawu zeCompact eziVuzisiweyo
Iinkcukacha zokuqala zeSony Xperia XZ2 kunye neXZ2 Compact zihluziwe kunye nefoto enokwenzeka.
Iqinisekisiwe ukuba i-Galaxy S9 + inokufika nge-256 GB yokugcina
I-rumor yamva nje enxulumene neGalaxy S9 isibonisa indlela esi siginali esinokufikelela ngayo kwintengiso ngokwahluka kwe-256 GB, ubuncinci kwiimarike ezithile.
IMeizu X2 iqinisekisiwe ukuphela kwe-2018
I-VP yeMeizu iqinisekisile ukufika kweMeizu X2 kunye nezinto ezithile kunye nexabiso lesi sixhobo, sikuxelela zonke iinkcukacha.
Iselfowuni yomdlalo weXiaomi ibizwa ngokuba yiBlack Shark
Imifanekiso yokuqala isandula ukucocwa ukuba i-smartphone yokuqala iya kuba njani kwabadlali abaninzi beXiaomi, isiphelo sendlela esiya kubizwa ngokuba yiBlack Shark.
Ngomhla we-16 kuMatshi inokuba ngumhla esinokufumana ngawo i-Samsung Galaxy S9
Ngokwencwadi ebonelelwe yinkampani yaseMzantsi Korea i-Samsung, i-Galaxy S9 esiza kuyibona ngoFebruwari 25 kwi-Mobile World Congress e-Barcelona, ​​izakufumaneka kwihlabathi liphela ukusukela nge-16 ka-Matshi. Ukongeza, olunye ulwazi esiza kukuxelela ngezantsi lutyhilwe kuthi.
I-Samsung Galaxy Note 8 iya kuba malunga nokuhlaziya kwi-Android 8.0 Oreo ngokwe-WiFi Alliance
Inqaku le-Samsung Galaxy 8 liza kuba malunga nokufumana i-Android 8.0 Oreo ngokwedatha evuzayo evela kwi-WiFi Alliance apho igama lemodeli lesi sixhobo livela ngolu hlobo lwenkqubo yokusebenza. Sikuxelela iinkcukacha!
I-Aquaris X2 kunye ne-Aquaris X2 Pro: Iifowuni ezintsha ze-BQ nge-Android One
I-Aquaris X2 kunye ne-Aquaris X2 Pro: Iifowuni ezintsha ze-BQ ezine-Android One.Fumana okuninzi malunga neefowuni ezimbini ezintsha ezivela kuphawu lweSpanish oluza kungena kwintengiso kungekudala.
Iimpawu eziphambili ze-HTC Desire 12 zivuzekile ngokwebhokisi yayo
Kutshanje iimpawu kunye nokuchazwa kwe-HTC Desire 12 kuye kwavuza, isiphelo sendlela esiza kubakho kwikhathalogu yenkampani njengodidi oluphakathi / oluphantsi oluya kuthi, nangona lungenazimpawu zinamandla, luza kujonga umngxuma uyilo inokufana ne-HTC U12. Siyakwandisa!
Amanqaku e-Samsung Galaxy S9 + kwi-Geekbench kunye ne-Exynos 9810 kwaye, ngelishwa, inamandla ngakumbi kune-SD845!
Isamsung ye-Samsung S9 + ibenebhentshi yeGeekbench, yenye yezona benchmark zithembekileyo ecaleni kweAnTuTu. NgokukaGeekbench, iGPS S9 + ene-Exynos 9810 ye-Samsung iyakhawuleza kwaye inamandla ngakumbi kune-Qualcomm Snapdragon 845. Fumanisa!
Khuphela ii-wallpapers zeXiaomi Redmi Qaphela 5
Ukuba ufuna ukutshintsha iimifanekiso zamaphephadonga ze-smartphone yakho, kweli nqaku siza kukubonisa i-33 yamaphephadonga avela kwiRedmi Qaphela 5 kunye neRedmi Qaphela 5 Pro.
INokia 8 Pro: Isiphelo esineekhamera ezintlanu kunye ne-Snapdragon 845
INokia 8 Pro: Isiphelo esineekhamera ezintlanu kunye neSpapdragon 845. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha yohlobo oluza kungena kwintengiso kulo nyaka.
UXiaomi uza kuvula ivenkile yakhe yokuqala e-Barcelona kule veki
UXiaomi uza kuvula ivenkile yakhe yokuqala e-Barcelona kule veki. Fumana ngakumbi malunga nokuvulwa kwevenkile yohlobo lwaseTshayina e-Barcelona ngaphambi kwe-MWC 2018.
Oku kukucaciswa kwethebhulethi ye-Samsung Galaxy Tab S4
Jonga zonke izinto ezichaziweyo ze-Samsung Galaxy Tab S4, ithebhulethi eyindlalifa kwiGalaxy Tab S3. Ngokwedatha enikiweyo, le gadget iza neprosesa engundoqo ezisibhozo, isikrini esikhulu se-10.5-intshi, kunye ne-Android 8.0 Oreo, phakathi kwezinye izinto.
I-Mobile World Congress e-Barcelona isondela. Zeziphi iindaba ezimnandi asigcinele zona uVernee?
I-Mobile World Congress e-Barcelona isondela, kunye nayo, izinto ezintsha esiza kuzifumanisa ngexesha lomsitho. Injalo imeko kaVernee, inkampani yaseAsia esilungiselele imigca eliqela kuthi apho iya kugxila kwizixhobo zecandelo ngalinye. Siyakwandisa!
Ukutshaja ngokukhawuleza kwePixel kunye nePixel 2 kufuna ubushushu obulungileyo ukuze busebenze
Ukutshaja ngokukhawuleza kweGoogle Pixel 2 XL kunye neGoogle Pixel 2 kuyachaphazeleka xa iimeko zemozulu zisinika ubushushu obungaphantsi kweedigri ezingama-20.
I-Nubia NX606J inokubonwa kwi-AnTuTu nge-Snapdragon 845 kunye ne-6GB ye-RAM
I-Nubia NX606J isandula ukuvuza kwi-AnTuTu Benchmark ngeprosesa yeQualcomm Snapdragon 845, kunye ne-6GB ye-RAM, ngaphandle kwezinye izinto ezenza ukuba ukhuphiswano oluphezulu lomeleleyo. Yazi!
Idatha entsha evuzayo evela kwi-Huawei P20 Plus
Idatha entsha evuzayo malunga neHuawei P20 Plus. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha yokuphela okuphezulu kwi-Chinese brand eya kuthi ifike kwintengiso ngo-Matshi.
I-Asus Z01RD ivuza i-Qualcomm SD845 kunye ne-6GB ye-RAM. Ngaba iya kuba yiZenFone 5 entsha?
UAsus, inkampani yaseAsia, ufuna ukungena kuluhlu lwabenzi beefowuni abakhetha iQualcomm Snapdragon 845 njengeprosesa yeflegi yabo. Oko kuyenzeka nge-Asus Z01RD, iselfowuni esanda kuhluzwa kwi-AnTuTu kunye nale SoC kunye ne-6GB ye-RAM, ukongeza kwezinye izibonelelo.
Fumanisa uncuthu olutsha lweefowuni zeSamsung zango-2018
Isamsung yazisa uncuthu lwengoma ngokuhambisa ii-mobiles zakho ngo-2018. Fumanisa inguqulelo entsha ye-Over Horizon ethi i-brand isungule kwintengiso yalo nyaka.
I-LG iya kuzisa i-LG G7 phakathi enyakeni
Amarhe amva nje ahambelana ne-LG G7 acebisa ukuba le ndlela yokuphela iyakubona ukukhanya embindini wonyaka, ngakumbi ngenyanga kaJuni kumsitho ozimeleyo.
Ixabiso leGalaxy S9 kunye ne-S9 + lihlungiwe kwakhona
Sikuxelela zonke iinkcukacha ngexabiso elinokubakho kwi-Galaxy S9 kunye ne-S9 +
INokia 4 sele isifumene isiqinisekiso seFCC
INokia 4 sele isifumene isiqinisekiso seFCC. Fumana ngakumbi malunga nefowuni entsha ye-brand esezantsi-phakathi eza kuthi ifike kwintengiso kungekudala.
I-LG V30 ngombala opinki ofumanekayo eSpain ukusukela ngomso
I-LG V30 epinki efumaneka eSpain ukusukela ngomso. Fumanisa ngakumbi malunga nale nguqulo intsha yefowuni ephezulu epinki.
Ividiyo evuzayo ibonisa ukusebenza kweXiaomi Mi Mix 2s
Ividiyo yokuqala esebenzayo yeXiaomi Mi Mix 2s ihluziwe, isiphelo sendlela esiya kuba sisizukulwana sesithathu seXiaomi Mi Mix
I-BlackBerry Motion sele ikhona eSpain
Umzamo weshumi elinanye weBlackBerry wokuba yenye indlela phakathi kwinqanaba eliphakathi ubizwa ngokuba yiBlackBerry Motion, isixhobo esele sikhona eSpain.
Ukucaciswa okwahlukeneyo kwe-Samsung Galaxy J4 kuvuza kwiGeekBench
I-Samsung Galaxy J4 isandula ukuvuza kwi-benchmark yeGeekBench kunye nokucaciswa kwayo okuyibeka njengombindi ophakathi kunye nezibonelelo ezifanelekileyo. Fumanisa!
Isamsung yazisa malunga nesizathu sokurhoxiswa kohlaziyo lwe-Oreo lweGPS S8
Ukurhoxiswa kohlaziyo lwe-Android Oreo lweGPS S8 kungenxa yokuqalisa kwakhona kwezixhobo apho zazifakwe khona.
Imifanekiso yokuqala evuzayo yeHuawei P20 Lite
Sikubonisa imifanekiso yokwenene yokuqala yeHuawei P20 Lite nazo zonke iinkcukacha zayo
Unboxing Xiaomi Mi 6, kunye nokubonakala kokuqala!
I-Unboxing yeXiaomi Mi 6 apho ukongeza ekukhutshweni okuqhelekileyo sijonga okokuqala kwisiphelo sendlela ngaphambi kokuvavanywa ngokupheleleyo kwevidiyo enokubakho ngaphandle kwamathandabuzo kukhetho olukhulu lokuthenga ngaphakathi kwinqanaba eliphezulu le-Android.
UGoogle ubhengeza, kwakhona, zeziphi izixhobo ezihlaziyiweyo kwi-Android Oreo kwaye ziya kwenza njalo kungekudala
Uhlaziyo olutsha lwenkqubo yokusebenza ye-smartwatches luya kufikelela kwizixhobo ezitsha ezi-5, ngokwoluhlu oluhlaziywe nguGoogle kwiwebhusayithi yalo.
Ifowuni ebalulekileyo ifika ngemibala emitsha kuhlelo lwayo olulinganiselweyo
Ifowuni ebalulekileyo isungula ushicilelo olulinganiselweyo ngemibala emitsha. Fumanisa ngakumbi malunga nohlelo olulinganiselweyo lwefowuni yohlobo olufika ngemibala emitsha kwintengiso.
Iinkcukacha ezintsha ezivuzayo zeXiaomi Mi Mix 2S ziya kukhanya ... Kuyinyani!
Sele sazi ngakumbi malunga neXiaomi Mi Mix 2S, isiphelo sendlela esiza kuza neprosesa esisiseko yeQualcomm Snapdragon 845, i-8GB ye-RAM, i-256GB yeROM, kunye nezinye izinto eziza kuyenza ukuba ikhuphisane ngokuqinileyo kwisiphelo esiphakamileyo se-Android. Uluhlu lwayo yonke into kukuba luyinyani! Siyakwandisa!
Uthotho lweNOMU S50: I-smartphone yokuqala erhabaxa ene-18: 9 screen kunye ne-Android 8.1 Oreo
Uthotho lweNOMU S50: I-smartphone yokuqala erhabaxa ene-18: 9 screen kunye ne-Android 8.1 Oreo. Fumana ngakumbi malunga nesixhobo esitsha sophawu esiza kufika kwi-MWC 2018.
Ukucoca okokuqala kwe-Moto G6
IMoto G6: Ukucaciswa kunye nemifanekiso evuzayo yefowuni. Fumana ngakumbi malunga nenkcazo kunye neefoto zokuqala ezivela kwifowuni entsha yeMotorola.
I-OnePlus inentshukumo embi xa kuziwa ekunyatheleni iXiaomi
I-OnePlus ifuna troll Xiaomi emva kokungaphumeleli kuvavanyo olwenziwe yinkampani yaseAsia ukubona ukuba zeziphi izinto ezikhethwayo kwiziphelo zazo.
INokia 7+: Imifanekiso evuzayo yeNokia yeNokia yeFowuni enye
INokia 7+: Ivuza igama lefowuni yokuqala ye-Android. Fumana ngakumbi malunga nefowuni entsha kraca eya kuthi ivezwe kwi-MWC 2018.
I-Hisense HLTE212T ibonwa okokuqala e-TENAA
I-Hisense HLTE212T ityhilwe e-TENAA, umlawuli wase-China kunye nesiqinisekiso. Ngokwedatha yayo, esi sixhobo siza kunye neenkcukacha kunye neempawu ezifanelekileyo eziphakathi / eziphantsi, ezinje nge-3GB ye-RAM, i-1.40GHz quadcore SoC, phakathi kwabanye. Yazi!
Iividiyo zokuqala ezisemthethweni zeGalaxy S9 zilapha
Isamsung ipapasha iividiyo zokuqala ezisemthethweni zeGPS S9. Fumana ngakumbi malunga neevidiyo malunga nefowuni entsha yesiphelo esivela kuhlobo lwaseKorea.
I-Asus X00RD ivuza kwiGeekBench, iselfowuni, mhlawumbi, ene-Android Go
Inkampani yaseAsia iAsus, ibonakala ngathi ine-terminal ene-Android 8.1 Oreo kuhlobo lwayo lweGo, kunye neenkcukacha ezithile kunye neempawu zeselfowuni esezantsi, ngokokuvuza kweGeekBench. Fumanisa!
I-Galaxy S9 iya kuba nesandi se stereo kunye neAnimojis
Iimpawu ezimbini ezintsha ezibonakala ngathi zibonisa ukuba i-Galaxy S9 kunye ne-S9 + ziya kuqala zizi-emojis zoopopayi kunye nenkqubo yesithethi se stereo.
I-Xiaomi Redmi Qaphela i-5 kunye ne-5 Pro sele zisemthethweni, yazi iinkcukacha zazo ngokupheleleyo!
Xiaomi Redmi Qaphela i-5 kunye ne-5 Pro: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa. Fumana ngakumbi malunga neefowuni ezimbini ezintsha zeXiaomi eziboniswe namhlanje eIndiya.
I-AnTuTu ityhila i-Sony H8266, iselfowuni eneQualcomm Snapdragon 845 SoC kunye ne-4GB ye-RAM
Kutshanje kwi-AnTuTu, i-Sony H8266, isiphelo sendlela apho ezinye iinkcukacha zayo ziye zavuza khona, ngokoko kusibonisayo, iya kuba yinxalenye yezinga eliphezulu kwikhathalogu enkulu yaseAsia. Kunye ne-Snapdragon 845, 4GB ye-RAM, kunye ne-Android 8.0 Oreo, sisiphi isithembiso.
Ifowuni ebalulekileyo ithengise iiyunithi ezingama-88.000 kwiinyanga ezintandathu
Ifowuni ebalulekileyo yenze kuphela ukuthengisa iiyunithi ezingama-88.000 ngo-2017. Fumanisa ngakumbi malunga nokuthengiswa okuphantsi kwefowuni ebalulekileyo kunyaka ophelileyo.
I-Android P iya kuhambelana neetheminali ezinotshi
Inguqulelo elandelayo ye-Android P ekugqibeleni iya kubonelela ngenkxaso yenotshi ebonakala ngathi yinto eyaziwayo phakathi kwabavelisi be-Android.
UXiaomi usebenza kwi-smartphone yokudlala
UXiaomi ngoku usebenza kwi-smartphone yokudlala. Fumanisa ngakumbi malunga nezicwangciso zenkampani esebenza kwi-smartphone yayo yokuqala yokudlala.
Umfanekiso wokuqala weHuawei P20 ngenotshi kwaye ngaphandle kwemida ucociwe
Kwinyanga ephelileyo phambi komhla ocwangcisiweyo wokubonisa i-Huawei P20, umfanekiso sele uvuza nje apho ubonakalisa ukuba iflegi elandelayo yeHuawei izakuba njani
IXiaomi Redmi Qaphela i-5 evuzayo ngaphambi kokunikezelwa kwayo
Ukucoca imifanekiso yokuqala yeXiaomi Redmi Qaphela 5. Fumanisa uyilo lwefowuni, oluhluzwa ngaphambi kokunikezelwa kwalo ngoFebruwari 14.
I-Sony Xperia XZ2 Pro: I-Benchmark evuzayo ye-Sony yokuqala ene-18: 9 screen
I-Sony Xperia XZ2 Pro: I-Benchmark ye-Sony yokuqala ene-18: 9 screen. Fumana ngakumbi malunga nefowuni entsha yakwaSony eya kubheja kuyilo olutsha.
Ukucaciswa kunye nemifanekiso yeZTE Axon 9
Iflegi elandelayo ye-ZTE, iAxon 9, ayizukufika kwimarike kude kube phakathi enyakeni, kodwa imifanekiso yokuqala kunye nokubalulwa kwayo sele kuvuza.
Ibhentshi yokuqala yeGPS S9 ene-6 GB ye-RAM ihluziwe
Ibhentshi lokuqala leGlass S9, isibonisa iprosesa yeQualcomm's Snapdragon 845, eneziphumo ezigqithileyo kumanduleli wayo.
Ukucoca uyilo lweMoto Motorola E5 Dlala
Umlilo E5 Dlala: Ukucoca uyilo lwesiphelo esisezantsi esitsha seMotorola. Fumana ngakumbi malunga nefowuni entsha yesiphelo esisezantsi eza kufika ngo-Epreli.
IXiaomi Mi A1 ngombala obomvu ifika eSpain ixesha elincinci
IXiaomi Mi A1 ngombala obomvu sele ikhona eSpain. Fumanisa ngakumbi malunga nenguqulo ebomvu yesixhobo esele sevenkileni eSpain
Iinkcukacha ezintsha ezivuzayo zeXiaomi Mi Mix 2S ziqinisekisa ukuba izakufika nge-Snapdragon 845 kunye ne-8GB ye-RAM
Kwiintsuku nje ezimbalwa ukusuka kwiNkomfa yeHlabathi yeFowuni eza kubanjelwa e-Barcelona, ​​eSpain, iXiaomi Mi Mix 2S ibisinika into yokuthetha ngayo. Ngeli thuba, kutsha nje, iinkcukacha ezichaziweyo ziye zaqinisekisa ukuba izakufika nge-Snapdragon 845, 8GB ye-RAM, kunye nomfundi ofaka iminwe phantsi kwescreen.
Imifanekiso yokuqala kunye neempawu ze-Asus Zenfone 5 Lite
Imifanekiso yokuqala kunye neenkcukacha ze-Asus Zenfone 5 Lite ziye zavela
Imifanekiso yokuqala ye-Samsung DeX yeGPS S9 icociwe
Kwakhona njengesiqhelo, kwiintsuku ngaphambi kokunikezelwa kwesizukulwana esitsha seGPS S9, u-Evan Blass uye wavuza indlela isizukulwana esitsha seSamsung DeX
I-LEAGOO iya kwazisa ngokusesikweni i-Android yokuqala ngeNotshi ngoFebruwari 26
Inkampani yaseAsia iLeagoo izakuveza ngoFebruwari 26, eyokuqala i-Android iphefumlelwe ngokucacileyo yi-iPhone X, inotshi ephezulu kwesikrini
Ezi ziya kuba ziimpawu zeXiaomi Mi 7 ngokungqinelana nokuvuza
Kutshanje, iinkcukacha ezininzi zeenkcukacha zobuchwephesha kunye neempawu ezinokuthi zithwalwe yiXiaomi Mi 7, indawo elandelayo yenkampani yaseAsia eza kubona ukukhanya kulo nyaka, mhlawumbi kwi-MWC eza kubanjelwa e-Barcelona, ​​eSpain, ziye zavuza.
I-Honor 8 kunye ne-7X ziya kufumana i-Android 8.0 Oreo… Kwaye kuya kuba ngaphambi kwehlobo!
IHuawei Honor 8 kunye ne-7X, ngokwe-Honor France, iya kufumana i-Android 8.0 Oreo phantsi kwe-EMUI 8 ngaphambi kwehlobo esele lisondele. Ezi ziindaba ezigqwesileyo njengoko i-Honor India ibisitsho ngaphambili. Siyakwandisa!
U-Elephone ufika eSpain kunye ne-Elephone U kunye ne-U Pro
Umhlaba we-Elephone eSpain nge-Elephone U kunye ne-U Pro. Fumanisa ngakumbi malunga nokufika kwegama laseTshayina kunye neefowuni zalo eziphakathi eziphakathi.
Isamsung isungula ngokusesikweni i-Android Oreo yeGPS S8 kunye ne-S8 +
Emva kokulinda ngaphezulu kweenyanga ezintandathu, i-Galaxy S8 kunye ne-S8 + ekugqibeleni baqale ukufumana ingxelo yokugqibela ye-Android Oreo
IPanasonic P100, ifowuni esezantsi esele ifumaneka eIndiya ngeFlipKart
IPanasonic isandula ukwazisa i-P100 kwintengiso yaseIndiya ngevenkile yeFlipKart kwi-Intanethi. Esi sixhobo sisezantsi siyafumaneka siyathengiswa, kwaye singeniswa ngeendlela ezimbini: Enye ine-1GB ye-RAM, enye ine-2GB. Yazi!
I-Archos Core 55S, 57S kunye ne-60S: 18: 9 imiboniso ihlasela isiphelo esisezantsi
I-Archos Core 55S, 57S kunye ne-60S: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa. Fumanisa ngakumbi malunga nokuqaliswa kwezi fowuni zintathu zivela kuhlobo lwaseFrance.
Ii-Smartphones eziPhezulu zokunika ngoSuku lweValentine
Ii-Smartphones eziPhezulu zokunika ngoSuku lweValentine. Fumanisa olu khetho kunye nee-smartphones ezingcono kakhulu kuluhlu ngalunye onokuthi ulunike uSuku lweValentine kulo nyaka.
Ikhaya likaGoogle liyakwazi ukubonisa ulwazi kwiTV ngeChromecast
Isithethi esihlakaniphile seKhaya likaGoogle sele siqalisile ukuvumela abasebenzisi ukuba babonise iziphumo zemibuzo yabo kwiTV exhunywe kwiChromecast.
I-BQ Aquaris VS kunye neVS Plus sele zisesikweni, zazi iinkcukacha zazo
I-BQ Aquaris VS kunye neVS Plus: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa. Fumana ngakumbi malunga neefowuni ezintsha zohlobo lweSpanish esele lufumaneka.
I-Kodi 18 iya kuhambelana noMncedisi kaGoogle
Inguqulelo elandelayo yeRhafu, okwangoku ekwi-beta, iya kusinika ukuhambelana nomncedisi kaGoogle, uMncedisi kaGoogle
Ukuphonononga vkworld S8
Gqibezela uphononongo lwe-vkworld S8, le smartphone ayisiyiyo enye into ye-Samsung Galaxy S8. Ngaba iya kuba kwindawo ephezulu yeselfowuni? Sikuxelela iimpawu, amaxabiso kunye nokufumaneka kwesi sixhobo saseTshayina kuninzi esinokukunika.
Hlela kwangaphambili i-Ulefone Power 3S eGearBest, iselfowuni ene-6350mAh ibhetri kunye nokwaziwa kobuso!
Inkampani yaseTshayina i-Ulefone, ilungiselele i-Ulefone Power 3S, isiphelo sendlela ephezulu esinenzuzo ezininzi ezinje ngokuqatshelwa kobuso, ibhetri enkulu eyi-6.350mAh, iikhamera ezine, umfundi weminwe, nokunye okuninzi kuphela ngeedola ezili-169.99 endaweni ye- $ yokuqala. 229.99.
Dibana ne-Infinix Hot S3, i-terminal enxanelwe ukuthandwa
I-Infinix Hot S3 isungulwe namhlanje e-India ngeempawu kunye neenkcukacha ezichaphazelekayo ze-smartphone ekumgangatho ophakathi. Oku sele kufumaneka ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo ngeFlipKart ngexabiso le-Rs 8.999 kunye ne-Rs 10.999. Yazi!
Uyeka njani ukuba likhoboka lomnxeba? INomu S10 isinika impendulo!
Yonke imihla, siya sixhomekeka ngakumbi kwiifowuni, kwaye sishiya ngasemva ubuhlobo, ukuzonwabisa, iminyhadala yoluntu, phakathi kwezinye izinto ezibaluleke kakhulu. Konke oku kungenxa yokuba sizicwilisa kwihlabathi lobuchwepheshe. Ukubeka i-spin koku, iNomu S10 iza nezona zinto zibalaseleyo. Yazi!
I-Xperia XA2 kunye ne-XA2 Ultra zingenisa inkqubo ye-Sony Open Device
I-Xperia XA2 kunye ne-XA2 Ultra sele zikwinkqubo ye-Sony Open Device. Fumanisa ngakumbi malunga nokungena kweetheminali kule nkqubo.
Imifanekiso emitsha yeGalaxy S9 kunye neGalaxy S9 +
U-Evan Blass, upapashe kwiakhawunti yakhe ye-Twitter, imifanekiso emitsha yezinto eziza kuba yiflegi elandelayo ye-Samsung, i-Galaxy S9 kunye ne-S9 +, isiphelo sendlela esiza kwenziwa ngokusesikweni ngoFebruwari 25 kwi-MWC
IMotorola ihlaziya iMoto Z, iZ2 Play, iG Plus 4 kunye nokunye kwi-Android Oreo
IMotorola ihlaziya iMoto Z, G Plus 4, kunye nezinye ezintandathu kwi-Android Oreo. Fumana ngakumbi malunga nohlaziyo kwi-Android Oreo efikelela kwiifowuni ezintandathu zohlobo
Imifanekiso yokuqala yeZenFone 5 ihluziwe, eza kuthi thaca kwi-MWC
Iiveki ngaphambi kokunikezelwa koluhlu lweZenFone 5, imifanekiso yokuqala yesinye seetheminali eziya kuba yinxalenye yoluhlu olutsha lwe-Asus ka-2018 zisanda kuhluzwa.
I-LG iyaphuma kwintengiso yefowuni yaseTshayina
Inkampani yaseKorea i-LG iya kuvala iiofisi zayo zokwahlula umnxeba e-China, ishiye ilizwe ngokupheleleyo, okuthetha ukuba isenokungabi lilizwe lokuqala apho inkampani iyeke khona ukubakho.
Utyhile uyilo lweHuawei P20 enkosi kwizembozo zayo
IHuawei P20: Ukucoca uyilo lwesixhobo ngezigqubuthelo zayo. Fumanisa ngakumbi malunga noyilo lwesiphelo esitsha sophawu lwesiTshayina, esele saziwa ngenxa yemigca yayo.
INokia 7 Plus iye yavuza: Yazi imifanekiso yayo kunye nokubalulwa
INokia 7 Plus: Imifanekiso evuzayo kunye neenkcukacha. Fumana ngakumbi malunga nefowuni entsha yeNokia eza kuthi thaca kwi-MWC 2018.
UFujitsu uthengisa ukwahlula kweefowuni eziphathwayo
Inkampani yaseJapan iFujitsu isandula ukubhengeza ukuba ithengise ukwahlula kweefowuni eziphathwayo kwiqela eliyinkunzi eliyiPolaris, apho inkampani yaseJapan inesibonda, ke oko kubonakala ngathi yindawo kunye nenxalenye.
Ukucaciswa kunye neempawu zeSharp Android One S3, uluhlu oluphakathi lwenkampani yaseJapan
Inkampani yaseJapan i-Sharp, iye yazisa ngokusesikweni kwaye yaphehlelela i-Sharp Android One S3 eJapan ngexabiso elifikelelekayo elimalunga nee-yen ezingama-32.400, ezinokuba malunga nee-euro ezingama-239. Le iza ne-Android 8.0 Oreo phantsi kweprojekthi ye-Android One.Siyibonisa yona!
UGoogle ulungisa iingxaki zeChromecast ngoqhagamshelo lweWifi
Phantse inyanga emva kokubhengezwa kweengxaki kwiChromecast ngoqhagamshelo lweWi-Fi, uGoogle ekugqibeleni usifumene isisombululo esisasazwa ngeenkonzo zikaGoogle.
Fumana i-Honor 6X ngexabiso elikhulu kwiLigthInTheBox
IHuawei Honor 6X ikwisibonelelo esothusayo nesingenakuphikwa kwivenkile ekwi-Intanethi yase-Asia iLighInTheBox kangangexesha elithile. Ungayithenga ngexabiso elifikelelekayo elimalunga ne- $ 189.99, ethi, nge-euro, ibe yinto efanayo malunga nee-euro ezingama-152. Thatha isithuba se!
URazer uvula ingxelo ekhethekileyo yeRazer Ifowuni eneenyoka zegolide
Umvelisi wezixhobo zokudlala usungule uhlelo olukhethekileyo lweRazer Ifowuni eneenyoka zegolide ezinokuthengwa kuphela eHong Kong naseMelika.
Iimpawu zeXiaomi Redmi Qaphela 5 ziyahluzwa kwakhona
Sinemifanekiso emitsha evuzayo yeXiaomi Redmi Qaphela 5, yazi iinkcukacha ezintsha zale foni ilandelayo yeXiaomi kunye nomhla wayo wentetho
I-OnePlus iphinda-phinda inzuzo yayo kunyaka omnye
I-OnePlus ikwazile ukuphinda kabini inzuzo yayo ngonyaka omnye. Fumana ngakumbi malunga neziphumo zenkampani ezifumana umzuzu omnandi kakhulu.
Le yi-Samsung Galaxy eya kufumana i-Android Oreo ngokungqinelana nokuvuza okutsha
Funda ngokuvuza okutsha okusixelela ukuba zeziphi izixhobo zeSamsung eziza kufumana uhlaziyo kwi-Android Oreo kule 2018.
U-Sony uqinisekisa ukuba ii-smartphones ze-premium ziya kuba nohlaziyo lweminyaka emibini
U-Sony usandula ukuguqula umgaqo-nkqubo wokuhlaziya kuluhlu lwee-smartphones zalo zepremiyamu, eqinisekisa ukuba olu luhlu luya kuba neminyaka emibini yokuhlaziywa okuqinisekileyo.
Thatha ithuba lezaphulelo zikaValentine eBanggood
I-Banggood: Izaphulelo ukuya kuthi ga kwi-90% ngoSuku lweValentine. Fumana ngakumbi malunga nezaphulelo zoSuku lweValentine kwivenkile edumileyo.
I-Oppo A71 (2018) ikhutshwa ngobuchwephesha bobuchwephesha bobuchwephesha be-AI
I-Oppo iveza i-A71 (2018), inguqulelo ehlaziyiweyo ye-A71 eyasungulwa kunyaka ophelileyo, kwaye iza phantse neempawu ezifanayo kunye nokubalulwa kokwahluka kwayo okungaphantsi, nangona iprosesa ibhetele kunye netekhnoloji yokuqonda ubuhle be-AI. Yazi!
IQualcomm kunye ne-Samsung bomeleza ubudlelwane babo ngesivumelwano esitsha
IQualcomm kunye ne-Samsung bavala isivumelwano esitsha sokusebenzisana. Fumana ngakumbi malunga nesivumelwano esitsha esele zivaliwe ziinkampani ezimbini.
I-beta yeVLC yamva nje inika inkxaso kwi-Samsung DeX
Uhlaziyo olulandelayo lwesicelo seVLC luya kusinika inkxaso ngesixhobo seSamsung DeX esinokuthi siguqule i-S8, S8 + okanye iNqaku 8 kwikhompyuter ukuze siyisebenzise.
I-OUKITEL U18: I-clone yokuqala ye-iPhone X iyafumaneka kwi-oda yangaphambi kwe- $ 159,99
I-OUKITEL U18: I-odolo yangaphambili ye-iPhone X ye- $ 159,99. Fumana ngakumbi malunga nefowuni yohlobo lwesiTshayina ngoku olugciniweyo
Abasebenzisi benkqubo ye-Android 8.0 ye-beta yeGalaxy S8 iya kuhlaziya phambi komnye umntu
Abasebenzisi beGPS S8 abayinxalenye yenkqubo ye-Android 8 beta baya kuba nakho ukonwabela usuku olunye ngaphambili kunabo bonke abasebenzisi be-Android Oreo
Iimpawu, ukucaciswa kunye nexabiso elivelileyo leAlcatel 5, uluhlu oluthembisayo lwaphakathi
Iselfowuni i-Alcatel 5 ivelise i-buzz ezininzi okoko yaboniswa kwi-Consumer Electronics Show eLas Vegas eyenzeke kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Ngoku, ukuvuza kwayo kutshanje kuqinisekisa amanqaku kunye neenkcazo esele sizazi. Siyakwandisa!
IHuawei Hlawula, iqonga lokuhlawula lomzi mveliso kungekudala liza kufika eYurophu
U-Huawei Pay ulungiselela ukungena eYurophu ngokusemthethweni. Fumanisa ngakumbi malunga nokufika kweqonga lokuhlawula uphawu lwesiTshayina.
Ifowuni yeRazer ngoku ixhasa umxholo we-HDR ovela kwiNetflix kunye neDolby 5.1
Enkosi kweyona nto iRazer Ifowuni iphumeze emva kohlaziyo lwayo lwamva nje, iRazer yokuqala ye-smartphone ngoku ixhasa umxholo we-HDR ovela kwiNetflix nakwiDolby 5.1.
INokia 5 kunye no-6 baqala ukufumana i-Android 8.0
Zombini iNokia 5 kunye neNokia 6 ziqalisile ukufumana uhlaziyo ekudala lulindelwe kwi-Android Oreo 8.0, ukufezekisa ukuzibophelela kwe-HMD kunye neNokia xa besungula izixhobo zombini emarikeni.
IXiaomi Mi A1 iyaqhubeka nokuba neengxaki emva kokuhlaziya kwi-Android Oreo
Iingxaki zeXiaomi Mi A1 nge-Android Oreo zisekhona. Fumana okuninzi malunga nohlaziyo kunye neengxaki ezininzi ezikhoyo kubasebenzisi.
UXiaomi kungekudala uza kuvula ivenkile entsha eSpain
UXiaomi uvula ivenkile entsha eSpain kwaye enze umtsi wokuya e-Itali. Fumana ngakumbi malunga nezicwangciso zebrendi yokwanda kwayo eYurophu.
IMotorola yokumilisela i-4GB ye-RAM Moto X6 e-India
IMotorola izakwazisa ngohlobo olunamandla ngakumbi lweMoto X4 yayo eyaziwayo eIndiya ngoFebruwari 6. Esi sixhobo siza kuza ne-8.0GB ye-RAM kunye ne-Android XNUMX Oreo efakwe ngaphambili kumzi-mveliso, nangona isaza kuba noyilo olufanayo nezinye izinto ezimbini ezahlukeneyo ezine-RAM esezantsi. Siyakwandisa!
I-Samsung Pay ngoku ifumaneka ngokusemthethweni eMexico
Isamsung isandula ngokusesikweni inkqubo yayo yokuhlawula ngaphandle kwamacingo ngokusebenzisa i-smartphone okanye iwatchwatch eMexico, emva kokuqala uhambo lwayo ngo-Novemba ophelileyo.
IVivo Xplay7 iya kuba ne-10 GB ye-RAM kunye ne-4x zoom zoom
Yonke into ibonakala ibonisa ukuba i-smartphone yokuqala ene-10 GB ye-RAM iya kuba yiVivo Xplay7, isiphelo sendlela esiya kuhamba kunye ne-4x zoom zoom.
Imifanekiso yokuqala yeMeizu 15 Plus ihluziwe
Ukucoca imifanekiso yokuqala yeMeizu 15 Plus. Fumanisa ngakumbi malunga nomnxeba ovela kuhlobo lwesiTshayina uyilo lwalo esele lubonakalisiwe ngezi zinto zinikezelwayo.
IHuawei MediaPad M5. Funda malunga noyilo lwethebhulethi esiza kuyibona kwi-MWC!
I-Huawei ilungiselela iMediaPad M5 yayo elandelayo, ithebhulethi eya kuthi ibekwe njengendlalifa ye-MediaPad M3 eyaziswe kwi-IFA eBerlin kunyaka ophelileyo. Siza kukuxelela yonke into malunga nayo kwaye siza kukubonisa uyilo lwayo!
I-Galaxy S9 iya kuba nakho ukububona ubuso bakho kunye ne-iris ngaxeshanye
I-Galaxy S9 iya kububona ubuso kunye ne-iris ngaxeshanye. Fumana ngakumbi malunga nenqaku elitsha eliza kubandakanya ifowuni yophawu lokuvula ifowuni.
Khuphela i-Galaxy S9 kunye ne-S9 + lodonga
Ukuba ufuna ukukhuphela iphepha lodonga elitsha le-Galaxy S9, kweli nqaku sikubonisa ukuba ungayenza njani ngendlela elula nelula.
UXiaomi ubhengeza ngokusesikweni iMi Box 4 kunye ne-4c ezifumaneka e-China kuphela
Namhlanje uXiaomi ubhengeze iibhokisi ezimbini ze-Smart TV, sikuxelela zonke iinkcukacha zeMi Box 4 kunye ne4c
UXiaomi upapasha ingxelo entsha yeRedmi 5
Inguqulelo entsha yeXiaomi Redmi 5 isungulwe. Fumanisa ngakumbi malunga nohlobo lwesixhobo esine-RAM engaphezulu esele iqalisiwe e-China.
IHuawei P20 iza kufika kule mibala kwintengiso
Funda ngemibala apho iHuawei P20 izakubetha ezivenkileni. Isiphelo esitsha esitsha sophawu lwesiTshayina sifika kwintengiso kungekudala, sele sazi ukuba yeyiphi imibala.
Eyona smartwatches ilungileyo yokujonga umsebenzi wethu
Ukuba ubukhe wacinga okwethutyana ukuba lixesha lokuba ushiye ukubetha kwento ukuze uqale ukusebenzisa iwatchwatch, kweli nqaku siza kukubonisa ukuba zeziphi ezona ziwotshi zibalaseleyo eziya kusivumela ukuba sibeke esweni umsebenzi wethu kwaye sisebenzise imisebenzi eyongezelelweyo .
INokia 7 Plus ibonisa ezinye zeenkcukacha zayo kwiGeekBench
INokia 7 Plus iye yavuza kwiGeekBench ibonisa ezinye zeempawu zayo zangaphakathi, ezinje ngeprosesa yeQualcomm Snapdragon 660 kunye ne-Android Oreo. Sikuxelela iinkcukacha!
Ifowuni eza kubhiyozela iminyaka eli-15 yeMeizu ivele kwindawo yokuqala evuzayo, yazi amarhe kunye neenkcukacha zeMeizu 15
Izizathu zokuthenga ifowuni ekumgangatho ophakathi
Izizathu ezi-4 zokuthenga ifowuni ekumgangatho ophakathi Fumana ngakumbi ngezizathu eziphambili zokuba kutheni kuyacetyiswa ukuba uthenge ifowuni ekumgangatho ophakathi.
I-Android Wear 2.9 iya kuba nekhawuntari yezaziso ezingafundwanga
Ityhile ezinye zezinto ezintsha ze-Android Wear 2.9. Fumana ngakumbi malunga neendaba eziza nohlaziyo olutsha lokubukela.
Inkqubo ye-beta ye-Galaxy S8 ifikelela esiphelweni
Isamsung iphelisa inkqubo ye-beta ye-Android Oreo yeGPS S8. Fumana ngakumbi malunga nokuphela kwenkqubo ye-beta kunye nomhla oza kuhlaziywa ngawo umnxeba.
Khuphela kwaye ufake imixholo yeXiaomi Mi A1 (AMAKHUMI)
Isifundo sevidiyo esisebenzayo apho ndicacisa indlela yokukhuphela kunye nokufaka imixholo yeXiaomi Mi A1, isiphelo sendlela esisinika inkohliso yabasebenzisi be-Android.
Uyilo lweMoto E5, umlandeli weMoto E4, unokubonwa kwividiyo
IMotorola Moto E5 inokubonwa kwividiyo apho, ekunikezelweni kwe3D ebonelelwe yiOnLeaks, sinokuluxabisa uyilo olupheleleyo lwesiphelo esiza kujolisa kuluhlu lwenkampani phakathi. Siyakubonisa!
UXiaomi sele ethengisa iifowuni ezininzi kune-Samsung e-India
IXiaomi idlula i-Samsung kwintengiso e-India. Fumana ngakumbi ngamanani entengiso yenkampani yaseTshayina kwilizwe laseAsia eligxothe iSamsung.
I-OUKITEL U18, i-smartphone yokuqala ephefumlelwe yi-iPhone X kungekudala
Ukusukela nge-29 kaJanuwari, uya kuba nakho ukubamba i-smartphone yokuqala ye-Android esekwe kwi-iPhone X, i-OUKITEL U18, isixhobo esibonelela ngakumbi.
IXiaomi Mi MIX 2 emhlophe kunye ne-8 GB ye-RAM ifika eSpain
Ushicilelo olukhethekileyo lweXiaomi Mi MIX 2 ngombala omhlophe lufika eSpain. Fumana ngakumbi malunga nale nguqulo intsha yefowuni yeXiaomi ngoku efika eSpain.
I-Vernee X: I-Unboxing kunye neempembelelo zokuqala
Apha unayo i-unboxing kunye nokuqala kokubonakala kweVernee X, isiphelo esipheleleyo sesikrini esinobhetri enkulu ye-6200 mAh kunye neenkcukacha zobuchwephesha ezinomdla kakhulu.
I-Samsung Galaxy S9 iya kuboniswa ngoFebruwari 25
Kusemthethweni: I-Samsung Galaxy S9 iboniswe ngoFebruwari 25. Fumanisa ngakumbi malunga nomhla wenkcazo yesiphelo esitsha sophawu lwesiKorea.
I-Samsung Galaxy S9 ivuza ividiyo entsha yokwenyani
Ukuvuza ividiyo entsha yokwenyani ye-Samsung Galaxy S9. Fumanisa okungakumbi malunga nale vidiyo ichaphazelwe kwifowuni yohlobo lweKorea ebonisa isikrini sefowuni.
I-ZTE yeqa inani lesibhozo kwaye yazisa i-Axon 9, eyindlalifa kwi-Axon 7
Kutshanje, ekunikezelweni kwe-ZTE Axon M kwintengiso yaseTshayina, inkampani yaseAsia yabhengeza ukuba umntu oza kungena ezihlangwini zeAxon 7 izakuba yiAxon 9, isiphelo sendlela esiza kufika kulo nyaka ukuvuselela impumelelo yaso sangaphambili. Sandisa iindaba kuwe!
Ukuphehlelelwa kweHuawei P11 kunokubambezeleka ukuze kungabikho khuphiswano ngokuchasene neGPS S9 kunye ne-S9 +
IHuawei P11 ayinakufika ngexesha le-MWC 2018 kwaye endaweni yoko ivele ngo-Epreli, yazi zonke iinkcukacha zolibaziseko olungalindelekanga
I-Ulefone Power 3 Max iya kuba nebhetri enkulu ye-13.000mAh
I-Ulefone iqinisekisile ukuba sele isebenza kumlandeli wePower 3 ... Yi-Ulefone Power 3 Max, isiphelo esinamandla esiza nebhetri enkulu ye-13.000mAh ukumelana nazo zonke iimfuno zethu nokuba lihamba ixesha. Siyakwandisa!
Imele ukuba ivuza i-Samsung Galaxy J8 nge-Android 8.0 Oreo
Kutshanje, kwi-GFXBench nakwiGeekBench kuye kwavuza isixhobo seSamsung, kwaye inokuba yiGlass J8 okanye, ukusilela oko, inguqulelo ephuculweyo yeJ7 ene-Android 8.0 Oreo kunye nolunye ulwazelelo oluya kuyibeka embindini- Uluhlu lwefemu yaseMzantsi Korea.
I-OUKITEL U18 iya kufumaneka njenge-pre-sale ukusuka ngoJanuwari 29
U-OUKITEL ubhengeze ukuthengiswa kwangaphambili kwe-OUKITEL U18, iselfowuni ye-Android enoyilo olufana nolo lwe-iPhone X ngaphambili, kwaye iyafana naleyo yeHuawei Mate 10 Pro.Oku kuya kuqala ngoJanuwari 29. igalelo kwiivenkile ezahlukeneyo ezikwi-Intanethi.
I-Sony ivala "indawo yam ye-Xperia" inkonzo yendawo yefowuni
I-Xperia yam, inkonzo yendawo yefowuni iyavala. Fumanisa ngakumbi malunga nokuvalwa kwegama lefowni lenkonzo.
Nandipha izaphulelo ukuya kuthi ga kwi-20% kwiifowuni ze-LEAGOO kwiAliexpress
Thatha ithuba lesaphulelo kwiifowuni ze-LEAGOO kwiAliexpress. Fumana ngakumbi malunga nezaphulelo kwiifowuni zenkampani esele zifumaneka kwivenkile edumileyo.
Iifowuni ezili-10 ezithengisa kakhulu e-China ngo-2017
I-TOP 10 ezithengisa kakhulu ii-smartphones e-China kwi-2017. Fumanisa ngakumbi ngoluhlu ngeefowuni ezithengisa kakhulu e-China kulo nyaka uphelileyo.
I-LG G7 ayizukuboniswa kwiNkomfa yeHlabathi yeFowuni ka-2018
I-LG ayizukuveza i-LG G7 kwi-Mobile World Congress 2018. Fumana ngakumbi malunga nesigqibo senkampani esiza kubangela uninzi lwezimvo.
I-Android Wear 2.8 ilapha kwaye izisa iindaba
I-Android Wear 2.8 yinyani kwaye ishiya iindaba ezininzi. Fumana ngakumbi malunga neendaba eziza nohlaziyo lweewotshi.
Oku kukubalulwa kwe-LG X4 Plus, iselfowuni enesiqinisekiso somkhosi
I-LG X4 Plus iye yaziswa ngokusesikweni eMzantsi Korea kunye nesatifikethi somkhosi esanikwa liSebe lezoKhuselo laseMelika elenza ukuba limelane neemeko ezinzima. Ukusuka apha kwi-Androidsis, sibonisa zonke iimpawu kunye neenkcukacha.
IXiaomi Mi Max 3 ibonakala ngokuvuza
Dibana nedatha yokuqala yeXiaomi Mi Max 3 emva kokuvuza. Fumanisa ngakumbi malunga nokuvuza apho idatha yokuqala evela kwifowuni ifunyenwe.
Ezi ziifowuni ezingama-40 zeXiaomi eziza kuhlaziya kwi-MIUI 9
Iifowuni ezingama-40 ze-Xiaomi eziza kuhlaziya kwi-MIUI 9. Fumana ngakumbi malunga nolu luhlu kunye neefowuni zohlobo oluza kuthi kungekudala lonwabele i-MIUI 9.
Fumana i-OnePlus 5T 6GB / 64GB nge- € 422.99 nje endaweni ye- € 499 kwiGearBest
I-OnePlus 5T iphantsi ngepesenti engummangaliso ye-15 kwiGearBest. Ukuba ufuna ukufumana isiphelo esingakholelekiyo sesiphelo, yenze ngokukhawuleza kuba kuphela ixesha elimiselweyo! Sikunika iinkcukacha.
I-Meizu M6s: Ukucaciswa koluhlu oluphakathi lwegama elitsha
Meizu M6s: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa kuqinisekisiwe. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha ekumgangatho ophakathi ukusuka kuhlobo lwesiTshayina.
Uyilo kunye nokubalulwa okunokwenzeka kunye nexabiso leAlcatel 3V
Iselfowuni i-Alcatel 3V yabonwa kwi-Consumer Electronics Show (2018) eLas Vegas, nangona iinkcukacha zayo kunye neempawu zayo zazingagunyaziswanga ngokusesikweni, yiyo loo nto kuye kwavela amarhe amaninzi ngazo. Siyakuxelela!
IHuawei P Smart: Ukuqinisekiswa okucacisiweyo kolu luhlu luphakathi luyathembisa
IHuawei P Smart: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa kuqinisekisiwe. Fumana ngakumbi malunga noluhlu lwefowuni ekumgangatho ophakathi oya kuthi ufike kwintengiso kwiiveki ezimbini.
Ikhathalogu yonke ye-Motorola ye-2018 icociwe
Iindaba zokuqala ezibomvu zonyaka, umntu othile kwa-Motorola uye waziqhekeza kwaye wavuza yonke ikhathalogu enokubakho yenkampani kulo nyaka
Ikhaya le-TV ye-Android lifika ngokusemthethweni kuGoogle Play
Ikhaya le-TV ye-Android ngoku liyafumaneka kuGoogle Play. Fumana ngakumbi malunga nale nguqulo ifuna ukuzisa i-Android Oreo kwiithelevishini.
Umphathi we-LG ngecele ukubuyisela kwakhona i-LG G7 kwasekuqaleni
Umphathi we-LG ufuna ukubuyisela kwakhona i-LG G7 kwasekuqaleni. Fumana ngakumbi malunga neengxaki inkampani ehlangabezana nazo ngoku.
IMotorola / Lenovo Moto E5 ivele kumfanekiso wokuqala ovuzayo, sineenkcukacha esizifumeneyo kunye neempawu ezinokubakho.
I-Samsung Galaxy A8 (2018) sele iyathengiswa eSpain
I-Samsung Galaxy A8 (2018) sele ikhona iyathengiswa kubasebenzisi beefowuni iMovistar kunye neVodafone eSpain malunga nee-euro ezingama-499 kunye nee-euro ezingama-479.99 ngokwahlukeneyo. Sandisa iindaba kuwe!
Iimodyuli eziQhagamshelekileyo 41: Iwotshi entsha ye-TAG Heuer
Iimodyuli eziqhagamshelekileyo 41: U-TAG Heuer uzisa iwatchwatch encinci. Fumanisa ngakumbi malunga ne-smartwatch entsha evela kuhlobo oludumileyo.
Dibana neArirang 151, i-Android yaseNyakatho Korea
EMantla Korea, ngaphandle kobuzwilakhe kunye nobukomanisi, bakonwabela ii-smartphones phantse njengathi, Yves abane-Arirang 151, iselfowuni ye-Android exhotyiswe ngeapps ezininzi ezinomdla kunye nokucaciswa okuthobekileyo kwaye okusisiseko, kodwa kuyasebenza. Sinikela kuwe!
I-Sony Xperia XA2, i-XA2 Ultra kunye ne-Xperia L2 ngoku ziyafumaneka ngoku-odolwa kwangaphambili kwi-BestBuy
Iifowuni ezibhengeziweyo kuMboniso wezoMbane zabaThengi eLas Vegas, i-Sony Xeperia XA2, i-XA2 Ultra kunye ne-L2, ziyafumaneka ngoku-odolwa kwangaphambili kwi-BestBuy, kwaye ziya kuphehlelelwa ngokusesikweni ngoFebruwari 16.
IXiaomi Redmi Qaphela i-5A ithengisa ngaphezulu kwe-1 yezigidi zeyunithi ngenyanga
IXiaomi Redmi Qaphela i-5A ithengisa ngaphezulu kweeyunithi zesigidi ngenyanga. Fumanisa ngakumbi malunga nentengiso esezantsi yeshishini laseTshayina
I-HMD ifumana amalungelo ku-Asha
I-HMD isandula ukufumana amalungelo kuzo zonke iimveliso zakwaNokia kuthotho lwe-Asha, uluhlu lweMicrosoft ngaphambili. Le nkampani yaseFinland iya kulawula ukuthengisa la maqela aphantsi. Siyakuxelela!
I-HTC U11 EYE: Udidi oluphakathi lwefemu yaseTaiwan
I-HTC U11 EYEs: Ukucaciswa kunye nemifanekiso yoluhlu olutsha lwaphakathi. Fumanisa ngakumbi malunga noluhlu oluphakathi oluphakathi lwegama laseTaiwan eliboniswe ngoMvulo
I-Maze Alpha kunye neComet ziyathengiswa kwiGearBest kunye ne-eBay
I-Maze Alpha 4G kunye neComet zithengiswa kwiGearBest kunye ne-Ebay, ngokwahlukeneyo. Ezi zixhobo ziphakathi kwinqanaba ziya kuthengiswa okwexeshana. Thatha isithuba se!
INokia 8 ifumana awona manqaku mabi kwi-DxOMark
Ikhamera yeNokia 8 ifumana amanqaku amabi kwiDxOMark. Fumana ngakumbi malunga nolu hlalutyo kunye nemvelaphi yala manqaku mabi.
Fumana i-4GB ye-RAM Vernee X ene-64GB iROM nge $ 199.99 nje kwiAliexpress
IVernee X 4GB + 64GB inexabiso kwi-199.99 $ engummangaliso kwi-Aliexpress. Esi siginali sineempawu eziqhelekileyo zoluhlu oluphakathi, nangona zinempawu ezintle oza kuzithanda ngokuqinisekileyo.
I-Unboxing kunye nokuqala kokuvela kwe-Ila X, iklone ye-iPhone X ngaphezulu kwe-100 yeeYuro
Apha ndikuzisa i-unboxing kunye nokuqala kokubonakala kwe-Ila X, enye into ehambelana ne-iPhone X ngaphezulu nje kwe-100 yeeYuro.
Nandipha izaphulelo kwiimveliso zeXiaomi ekukhanyeni kwiBhokisi
Nandipha izaphulelo kwiimveliso zeXiaomi ekukhanyeni kwiBhokisi. Fumana ngakumbi malunga nezaphulelo kwiimpawu ezinkulu zaseAsia kwivenkile.
I-HOMTOM: I-S12 Ixabiso eliphantsi le-18: 9 ye-smartphone kwintengiso
I-HOMTOM: I-S12 Eyona fowuni ibiza ixabiso eliphantsi ine-18: 9 kwesikrini kwintengiso. Fumana okunye malunga nale fowuni emele isikrini sayo kunye nexabiso eliphantsi.
Iselfowuni 3C: Ukucaciswa kunye nemifanekiso yokuqala evuzayo
Iselfowuni 3C: Ukucaciswa kunye nemifanekiso esemthethweni evuzayo. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha evela kuphawu lwesiFrentshi oluza kufika kulo nyaka.
I-OnePlus iya kuzisa ifowuni yayo entsha ekupheleni kwekota yesibini
Ifowuni entsha ye-OnePlus iya kufika ekupheleni kwekota yesibini. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha evela kuhlobo lwesiTshayina oluza kufika ngoJuni.
Fumana iBlackview A10 nge- $ 88.99 kuphela endaweni ye- $ 130.39 eCafago!
I-Blackview A10 ithengiswa ngokungaqhelekanga eCafago, kwaye ungayifumana nge- $ 88.99 endaweni ye- $ 130.39 yexabiso layo lokuqala elinekhowudi yekhuphoni. Sikunika iinkcukacha!
Iibhloko: I-smartwatch yemodyuli ene-Android esele ithengisiwe
Iibhloko: I-modular smartwatch ye-Android sele iyinyani. Fumanisa ngakumbi malunga newotshi yokuqala yeemodyuli eza kwi-Android ngale modeli.
Ukucaciswa kokugqibela kwe-Oukitel K10
Emva kweeveki ezininzi ngamarhe kunye nokulinda, inkampani i-Okitel ekugqibeleni ikhuphe iinkcukacha, amanqaku kunye nexabiso le-Oukitel K10000, i-terminal ene-11.000 mAh ibhetri.
UXiaomi no-Oppo baya kuba ne-iPhone X yokuvula ubuso
UXiaomi no-Oppo baya kuba ne-ID yobuso ye-iPhone X.Fumanisa ngakumbi malunga nesigqibo seenkampani ezimbini ezivumela ukuba basebenzise obu buchwephesha.
Fumana iXiaomi Mi 5S Plus nge $ 271.17 nje endaweni ye- $ 399.99 eBanggood
IXiaomu Mi 5S Plus ikwisibonelelo esingalibalekiyo ukuya kuthi ga kwi-32% isaphulelo eBanggood. Ungayifumana nge- $ 271.17 kuphela endaweni ye- $ 399.99 yexabiso layo lokuqala. Sikunika iinkcukacha!
Iqinisekisiwe: I-Galaxy S9 iya kuziswa ngoFebruwari
Iqinisekisiwe: I-Galaxy S9 iya kutyhilwa ngokusemthethweni ngoFebruwari. Fumanisa ngakumbi malunga nomhla wenkcazo yesiphelo esiphakamileyo seSamsung.
Ezi ziwotshi ezintsha ze-Android Wear eziboniswe kwi-CES 2018
I-CES 2018: Dibana newotshi entsha nge-Android Wear. Fumana ngakumbi malunga nala ma-smartwatches amatsha atyhiliweyo kwi-CES 2018.
USony ubhengeza iiNtloko zeNtloko kwiCES eLas Vegas
USony, inkampani yamazwe aphesheya yaseJapan, wayengekho kude kakhulu e-CES eLas Vegas. Phakathi kweemveliso zamva nje eziboniswe kule nkongolo, sifumana ii-headphone ezine ezingakholelekiyo.
Isamsung iya kuqala ukuvelisa i-smartphone yayo eguqukayo ngo-Novemba
Isamsung iya kuqala ukuvelisa ifowuni eguqukayo ngoNovemba. Fumana ngakumbi malunga nezicwangciso zenkampani ngefowuni yayo eguqukayo.
I-Samsung Galaxy On7 Prime iya kuthengiswa kwiAmazon India kungekudala
I-Samsung Galaxy On7 Prime iya kufumaneka kwintengiso kwiAmazon India kungekudala. Ukusuka apha kwi-Androidsis, sinazo zonke iinkcukacha kunye nokubalulwa kwesi sigxina.
I-Alcatel Series 1, 3 kunye ne-5: Iimodeli ezintsha zeAlcatel eziboniswe kwiCES 2018
I-CES 2018: Iselfowuni yazisa ngothotho olutsha lwe-1,3 kunye ne-5. Fumanisa ngakumbi malunga noluhlu olutsha lweefowuni ezivela kuhlobo lwaseFrance oluza kufika kulo nyaka.
I-Galaxy J2 Pro (2018) ibonakala ngokusemthethweni kwiwebhusayithi ye-Samsung Vietnam
Emva kokuba iGlass J2 Pro (2018) ivuze kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, namhlanje ivela ngokusemthethweni kwiwebhusayithi yeSamsung eVientam, yazi zonke iinkcukacha zayo.
Uhlaziyo kwi-Android Oreo lubangela ukusilela kwiXiaomi Mi A1
IXiaomi Mi A1 ene-Android Oreo ineengxaki ezininzi. Fumana ngakumbi malunga neengxaki eziye zabangelwa luhlaziyo kwifowuni.
I-Leagoo 2018 Carnival isizisela izaphulelo kwiifowuni ezintathu kwiGearBest
ILeagoo ibeka ezintathu zezona ndawo zidumileyo kwizaphulelo kwiGearBest. Ezi ziiLeagoo KICAA MIX, i-T5 kunye ne-T5C, iindlela ezintathu eziphakathi ezihamba ngeendlela ongaphoswa zizo.
I-Oukitel U18, i-smartphone entsha evela kwinkampani yaseAsia ephefumlelwe yi-iPhone X kwesikrini
Inkampani yaseAsia iazise ngokusesikweni i-Oukitel U18, i-smartphone ephefumlelwe yi-iPhone X kwaye isinika uphawu lweshiya yale modeli phezulu kwesikrini.
Fumana isaphulelo se-6GB ye-RAM MAZE Alpha X kwiGearBest
I-Maze Alpha X ene-6GB ye-RAM kunye ne-128GB yendawo yokugcina iyafumaneka kwiGearBest ngesaphulelo se-20%, ukuyibeka kwi- $ 249.99 nje. Sikuxelela zonke iinkcukacha zeli phulo lingenakuphikiswa!